ချစ်လိပ်ပြာ အချစ်စာပေ: လူနာကုတင် ၃၁ (ဇာတ်သိမ်းပိုင်း)
လူနာကုတင် ၃၁ (ဇာတ်သိမ်းပိုင်း)
မျိုးကျော် အိမ်ကထွက်လာပြီး ဘယ်ကိုသွားလို့ ဘယ်ကိုလာရမှန်းမသိဆိုပေမဲ့ ခြေထောက်တွေက သူ့အလိုလို သူငယ်ချင်းအရက်ဆိုင်ဘက်ကို ကားက မောင်းလျက်သားမို့ အရက်ဆိုင်ဝင်ပီး အရက်ဝင်သောက်တာပဲ... ကောင်းပါတယ်ဟု တွေးခါ ကားလေးကို အရက်ဆိုင်ရှိရာသို့ ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း မောင်းလာခဲ့တော့တယ်။ ဆိုင်ရောက်တော့ အရက်သောက်မယ်လို့ ကြံရွယ်လိုက်ပေမဲ့ အိမ်မှာ အဖေနဲ့ အမေရောက်နေတဲ့အချိန် မလုပ်ကောင်းပါဘူးလေလို့ ...တွေးမိပြီး မနက်ကတည်းက ဘာမှ မစားလာရသေးတာမို့ ကော်ဖီနဲ့ မုန့်ပဲ မှာလိုက်ပြီး စိတ်မပါလက်မပါ စားသောက်နေမိတယ်။ ငါ ဒီအတိုင်းကြီးထိုင်ပြီး ဘယ်လောက်ထိ အချိန်ဖြုန်းနေအုန်းမှာလဲ။ စဉ်းစားရင်း တင်မိုးနိုင် အကြောင်းက ၀င်လို့လာတယ်။ တကယ်ပါ သူများသားသမီးကို ဒီလောက်နာကျင်အောင် မျိုးကျော်မလုပ်ခဲ့ဖူးပါ။ ခုသူ တင်မျိုးနိုင်ကို လုပ်လိုက်တာ ကိုယ့်ကိုကို မတရားဘူးလို့ စိတ်ထဲခံစားလာရတယ်။ မိမိရဲ့ အားပါလှတဲ့ လက်ဝါးရဲ့ ရိုက်ချက်ကြောင့် တင်မိုးနိုင် ခွေခွေလေး လဲကျသွားတော့ သူ ကျွန်တော့်ကို မယုံနိုင်အောင် ကြည့်နေသလို တအားကို အားငယ်သွားတဲ့ မျက်နှာလေးရယ်ပါ။ ဟုတ်တယ် ငါ မှားပြီထင်တယ်။ မျိုးကျော် တစ်ယောက်ထဲ ထိုင်ရာမှ ထပြီးအိမ်ပြန်ရမလိုလို ဂဏာမငြိမ်ဖြစ်နေပြီးနေတုန်း..
“ဆရာ...ဆရာ့နာမည် ကိုမျိုးကျော်လား ခင်ဗျ..”
ဆိုင်က စားပွဲထိုးကောင်လေးပါ ... စိတ်ညစ်နေရတဲ့ ကြားထဲ နာမည်လာမေးနေတော့ ဘုဘောက်ပုံစံမျိုးနဲ့ ကြည့်လိုက်ပြီး...
“အေးဟုတ်တယ်... မင်းက ငါ့ နာမည်မေးပြီး ဘာလုပ်မလို့လဲ....”
“မဟုတ်ဘူးဆရာ... ကိုအောင်စိုးဖုန်းလာနေလို့ အကိုဒီမှာ ရှိလားမေးတယ် ရှိရင် ဖုန်းခဏလာကိုင်ခိုင်းပါ ပြောလို့ လာပြောတာပါခင်ဗျာ ..”
ခုမှ သဘောပေါက်တော့တာ မို့... စားပွဲထိုးလေးကို တချက်မနည်းပြုံးပြလိုက်ပြီး...
“အော်..အေးအေး... ဆော်ရီးကွာ... ဖုန်းက ဘယ်မှာလဲ... ”
ကောင်တာဘက်ကို တချက်သွားပြီး ဖုန်းသွားကိုင်လိုက်တယ်...
“အေး...ဟေ့အောင်စိုး ပြော ဘာလဲ.... ”
“ဟေ့ကောင် ဘာလဲဘက်လဲ တွေ လုပ်မနေနဲ့... မင်းဘာတွေ လုပ်နေတာလဲ မင်းဟန်းဖုန်းက ဘယ်ရောက်သွားတာလဲ....”
“ဘာမှမလုပ်ပါဘူးကွာ.. ဖုန်းက အိမ်မှာ ကျန်ခဲ့တာလား မသိဘူး...”
“အေး ကောင်းတယ် သိပ်ကောင်း ငါ အခု(.....) အထူးကုဆေးခန်းမှာ ..”
“မင်းက အဲ့မှာ ဘာလုပ်နေတာလဲ ဘယ်သူဘာဖြစ်လို့လဲ.....”
“မင်းအမေကွ... မင်းရဲ့အမေ...... ဒီဆေးခန်းမှာ လာတင်ထားရတာ... ”
“ဘာ...ဘယ်လို ...ဘယ်လို ဖြစ်လို့လဲ..”
“မင်းအဖေက မင်းများအလုပ်လာသလား ဘာလားနဲ့ ငါ့ဆီကို ဖုန်းဆက်တာ... မင်းကို အန်ကယ်က ဒေါသတွေထွက်လို့.... ဟေ့ကောင်.. မြန်မြန်လာခဲ့တော့ ဒါဘဲ..”
မျိုးကျော်ဖုန်းကို အမြန်ချပြီး အထူးကု ဆေးခန်းသို့ ထွက်လာခဲ့တော့တယ်။ ဆေးခန်းရောက်တော့ အောင်စိုးက အပြင်မှာ စောင့်နေပြီး ကြိုလို့။
“အမေဘယ်လို ဖြစ်တာလဲ... ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကွာ...”
“မမေးနဲ့ကွာ ဟိုမှာ အမြန်သွားတွေ့ ...”
အခန်းထဲရောက်တော့ လူနာကုတင်ပေါ်မှာ အမေ့ကို စတွေ့လိုက်ရတယ်။ အဖေကတော့ ကုတင်တဖက်မှ ထိုင်လျက် မျိုးကျော်ကို စားတော့ဝါးတော့မယ် ပုံနဲ့ကြည့်နေလေရဲ့။ တင်မျိုးနိုင်ကိုတော့ မတွေ့ရ...
“ဟယ်....သား... အမေဘာမှမဖြစ်ပါဘူး.. သွေးနည်းတက်လာပြီး မိုက်ကနဲ့ဖြစ်သွားတာ သားရဲ့ အမေဘာမှ မဖြစ်ဘူး...”
“ဘာကွ... မင်းက ထင်တယ်ပဲလား... မင်းကြောင့်မဟုတ်ရင်... မင်းအမေ ဒီကုတင်ပေါ်ရောက်စရာ အကြောင်းမရှိဘူးကွ...”
မျိုးကျော် အဖေလုပ်သူက စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနဲ့ ပြောလာလို့... မျုိးကျော် အမေက ၀င်တားရင်း....
“သားရယ်... အမေဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး....သား အဖေက တအားစိတ်ပူလို့ ဒီဆေးခန်းကို အတင်းခေါ်လာတာ.... တစ်ရက်လောက်နေရင် သက်သာမှာပါ အမေသိပါတယ်။ ခုက အားဆေးလေးဘာလေးသွင်းနေတာ....”
“အမေကလည်း ဒါဆို အိမ်မှာ နားနားနေနေပြီး သွင်းရတာပဲ .. လာ.. အိမ်ပြန်မယ်... ခုဆင်းတော့....”
“ရပါတယ်သားရယ်... အမေသားကို တစ်ခုတောင်းဆိုချင်တယ် သိလား...”
“ပြောလေ အမေ.... ”
“မနက်ကလေ သမီးက သူ့အိမ်ကို အတင်းပြန်မယ်လုပ်နေတော့ အမေတားတာ မရတာနဲ့ အမေတအား စိတ်ဆင်းရဲပြီး ခေါင်းတွေက မိုက်ခနဲ့ ဖြစ်သွားပြီး ဒီိလိုဖြစ်သွားတာ... အဲဒါသူလည်း စိတ်မကောင်းပါဘူး... စောစောကတင် အိမ်ပြန်ခိုင်းလိုက်တယ်။ အမေ့အတွက် ဆန်ပြုတ်လေး စားစရာလေးဘာလေး လုပ်ပေးရအောင် ဆိုပြီး ပြန်သွားတယ်... သားရယ် သမီးကလေ တကယ်လိမ္မာသလို အိမ်ထောင်မှုလည်း နိုင်နင်းတဲ့ မိန်းမကောင်းတယောက်ပါသားရယ်... သားသူ့ကိုကောင်းကောင်းဆက်ဆံသင့်တယ်... သားဒီလိုမလုပ်သင့်ဘူး... နောက်တခါလုပ်ရင် အမေလုံးဝ ခွင့်လွှတ်မှာ မဟုတ်ဘူး...”
အမေပြောနေရင်... လေးလေးနက်နက်ပြောနေသကဲ့သို့ မျက်နှာကို တင်းထားလို့နေတယ်.... မျုိုးကျော်မှာတော့ ဘာမှ ပြောစရာမရှိ.. အမေပြောတာကိုပဲ ခေါင်းငြိမ့်လို့ နားထောင်နေလိုက်တယ်....
“သားရယ်. အမေတို့လေ မိသားစု စည်စည်ကားကား သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းလေး ဖြစ်ချင်နေပြီ သားရယ်... သားလည်းငယ်တော့တာ မဟုတ်ဘဲ...နောက် အမေလေ မသေခင်မြေးလေး တစ်ယောက်လောက်တော့ ချီသွားချင်သေးတယ် သားရယ်... နော်နော်....”
အမေ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ပြောလာတော့ အမေ့ကို သနားမိလာတယ်။ စိတ်ထဲမှာလည်း တခုခုကို အပြီးတိုင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်..
“ဟုတ်ကဲ့ အမေရယ်.. သား ဒီနေ့ကစပြီး သူ့ကိုကောင်းကောင်း ဆက်ဆံပါ့မယ်... ”
“ဒါဆို သား ခုပြန်တော့... ညနေကြမှ သမီးနဲ့ အမေဆီ နှစ်ယောက် အတူတူလာခဲ့နော်...”
“ဟာ ..အမေကလည်း... အမေ့နားမှာ သား.... ခဏနေအုန်းမယ်လေ.... ”
“ဟေ့ကောင်... စကားမရှည်နဲ့ ပြန်ဆိုပြန်ကွာ...”
အဖေ့ကို ကြည့်လိုက်တော့ မျက်နှာကြောတင်းတင်းနဲ့ ကြည့်နေတယ်.. အမေကတော့ ပြုံးပြရင်... ပြန်တော့ဆိုပြီး အမူယာ ပြနေတာမို့ အခန်းပြင်ထွက်ခဲ့တယ်။ အခန်းအပြင်ရောက်တော့ အောင်စိုးရပ်စောင့်နေပြီး...
“မင်းတော်တော်ဆိုးတဲ့ အကောင်ဘဲကွာ... မင်း တင်မိုးနိုင်ကို ပါးရိုက်တာဆို..”
ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိ ကိုယ့်လုပ်ရပ်ကြောင့် သူငယ်ချင်းအချင်းချင်းတောင် ရှက်မိတယ်... မိန်းမသားတစ်ယောက် ကို လူမဆန်စွာရိုက်မိတဲ့ သူ့လက်တွေကို ပြန်ကြည့်နေမိတယ်။
“မင်းကွာ... တင်မိုးနိုင်က မင်းကို တော်တော်ချစ်တာနော်.. ကြာပါပြီ... မင်းကသာ ထုံထုံအအ လုပ်နေတာ... ငါတို့သိတာပေါ့... ငါတို့လည်း အသက်တွေကကြီးနေပြီမို့ မစကောင်း မနောက်ကောင်းလို့သာ မင်းတို့ကို အရောက်မပို့တာ.... ခုတော့လည်း မင်းကခြေသွက်လက်သွက် အိပ်ခန်းထဲမှာ တောင်ရောက်နေပါလားကွ”
မျိုးကျော် အောင်စိုးပြောနေတာတွေကို နားထောင်နေပေမဲ့ သူ့မျက်နှာကို စေ့စေ့မကြည့်ရဲ။ အပြစ်လုပ်ထားတဲ့ သူတစ်ယောက်လား... အောင်စိုးကတော့ ဆက်ပြောနေလေရဲ့ တင်မိုးနိုင်က မင်းကို ချစ်နေတာ ဘယ်လောက်ကြာခဲ့ပြီ... နောက်မင်းကို အလုပ်ထဲမှာ ခိုးကြည့်ခဲ့တာ။ မင်း အရက်တွေမူးပြီး မလာတဲ့ရက်တွေမှာ သူမင်းအလုပ်တွေကို ငါ နဲ့ နှစ်ယောက် ဘယ်လိုကူလုပ်ခဲ့တာတွေ.. မင်းပျောက်နေတော့ ရှိသမျှ ခွင့်တွေ အကုန်ယူပြီး မင်းကိုလိုက်ရှာနေတာတွေ... တခါလေ အလုပ်လာရင်တောင် သူ့မှာအားတွေ အင်တွေ မရှိတော့လို့ စားပွဲပေါ်မှာ မှောက်ပြီး အိပ်နေတာ MD တွေ့ပြီး သူ့ကိုဆူတာတွေ တင်မျိုးနိုင် မျိုးကျော်အပေါ် ဂရုစိုက်မှု အချစ်တွေကို တင်စားပြောမကုန်အောင်ပါပဲ.. မျိုးကျော် ဆက်လက်နားထောင်နိုင်စွမ်းရှိတော့ပါ။ တင်မိုးနိုင်ရှိတဲ့ သူ့အိမ်ကို အမြန်ပြေးသွားချင်နေမိတာမို့... အောင်စိုးကို နှုတ်ပင်မဆက်တော့ပဲ အမြန်ပြေးထွက်လာတော့တယ်။
မျိုးကျော် အိမ်ထဲဝင်လာတာကို တင်မိုးနိုင်သိပေမဲ့ လှည့်ပင်မကြည့်ပဲ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ မျိုးကျော်အမေအတွက် လူမမာစာလေး ချက်လို့နေတယ်။ မျိုးကျော် တင်မိုးနိုင်ကို နောက်မှအသာ ရပ်ကြည့်နေမိတယ်။ တင်မိုးနိုင် တကုပ်ကုပ်လုပ်နေတာကို ကြည့်ပြီးသနားလာသလို မနက်က တင်မိုးနိုင် ကို ပါးရိုက်လိုက်မိတဲ့ အဖြစ်ကို တွေးမိပြန်တော့ ပိုသနားလာမိလို့ တင်မိုးနိုင်အနားကပ်လို့လာမိတယ်..
တချက်ပင်လှည့်မကြည့်သလို ပြန်လည်းမထူး။ တင်မိုးနိုင် အနားအသာပြီး သူ့မျက်နှာလေးငုံကြည့်မိတော့ တင်မိုးနိုင်မျက်ရည်တွေ ကျလို့နေပြီလေ။
မျိုးကျော် တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ပခုံးလေးကိုကိုင်ပြီး....
“ငါ့ကို မထိနဲ့... ငါ့ကို မထိနဲ့နော်..”
“ငါတောင်းပန်ပါတယ်ဟာ... ငါခုနင့်ဆီကို တောင်းပန်ဖို့လာတာ... နင်ကျေနပ်တဲ့....အ....”
“တော်ပါတော့ဟာ.... နင့် အမေသက်သာရင် ငါတကယ်ပြန်တော့မှာ... ”
“တင်မိုးနိုင်... တင်မိုးနိုင်.... ငါ.. တောင်းပန်...”
“နင်ငါ့ဆီ ပြန်လာတာ.... နင့်အမေကြောင့် မဟုတ်လား..... နင့် အမေနင့်ကို ပြောလိုက်လို့ မဟုတ်လား....”
“မဟုတ်ဘူး တင်မိုးနိုင် မဟုတ်ဘူးဟာ..”
“တော်ပါတော့ဟာ.... ပင်ပန်းပါတယ်... နင် ငါ့အပေါ် ဘာစိတ်မှ မရှိဘူးဆိုတာ ငါယုံသွားပါပြီ....”
“တင်မိုးနိုင်... ငါခု နင့်ဆီပြန်လာတယ်ဆို ... ငါ့စိတ်သစ်လူသစ် အချစ်သစ်နဲ့ပါ....”
တင်မိုးနိုင် ဘာမှမပြောတော့ပဲ တိတ်ဆိတ်လို့နေလေပြီ။ ဆေးစရာပန်းကန်တချို့ကို ဆေးနေရာမှ ဆပ်ပြာရည်တွေ အများကြီးထည့်မိပြီး ဆပ်ပြာအမြုပ် ဗလပွကြား ပန်းကန်တွေကို ဆေးလို့နေတော့တယ်။
“တင်မိုးနိုင် ငါနင့်ကို တကယ်ချစ်တာပါ နင့်ကိုလေ.. ဟို..ဟို..ဟိုလေ...ဆေးရုံကလေ ပြန်လာပြီးကတည်းက ချစ်မိလာတာ.... ငါလေ.. ခုလို အခြေအနေတွေကျော်ပြီးမှ နင့်ကို ရည်စားစကားပြောရသလိုဖြစ်နေတာ ငါ စိတ်မကောင်းပါဘူးဟယ်... ငါ နင့်ကို တကယ်ချစ်တာပါ... ငါရင်ထဲကကို ချစ်မိလာတာပါ နင်သိပါတယ်... ”
မျိုးကျော် တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ပုခုံးလေးကို ဒုတိယအကြိမ်ဖက်ပြီး တင်မိုးနိုင်ကို ကြည့်လိုက်တော့ တင်မိုးနိုင် ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုလို့နေလေပြီ။ မျိုးကျော် တင်မိုးနိုင်ကို ရင်ခွင်ထဲဆွဲလှည့်ပြီး ဖက်ထားလိုက်တော့ တင်မိုးနိုင် မျိုးကျော်ရင်ခွင်ထဲ တိုးလို့သာ ငိုတော့တယ်။ မျိုးကျော်ရင်ထဲ အကြိမ်ကြိမ်နောင်တတွေ ရမိနေပြီလေ။ တင်မိုးနိုင် ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုနေရင်းမှ မျိုးကျော်မျက်နှာကို မျက်ရည်စက်လက်တွေနဲ့ မော်ကြည့်ရင်း....
“နင် ငါ့ကို ရိုက်တယ်နော်... နင်ငါ့ကို အရမ်းရက်စက်ခဲ့တယ်ဟာ.... နင်သိပ်ရက်စက်တယ် သိလား.. ငါ နင့်ကို သိပ်ချစ်သလောက် ငါ့အပေါ် အဲလိုဆက်ဆံတော့ ငါ.....”
မျိုးကျော် ဆက်နားမထောင်နိုင်သလို သူကိုယ်တိုင် မျက်ရည်တွေကျလာလို့ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို နမ်းလိုက်ပြီး....
“တော်ပါတော့ တင်မိုးနိုင်ရယ်... ငါ...ငါလေ နောက်တခါ နင် မျက်ရည်ကျမယ့် အဖြစ်မျိုး ဘယ်တော့မှ မလုပ်ဘူးလို့ ကတိပေးပါတယ်...”
မျိုးကျော် ပြောလိုက်တော့ တင်မိုးနိုင် မျက်ရည်လေးတွေသုတ် မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ မော့ကြည့်နေတော့ မျိုးကျော် တင်မိုးနိုင်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို ဒုတိယအကြိမ် နမ်းလိုက်တော့တယ်။
“တော်ပါတော့ဟယ် ငါ မနေတတ်တော့ဘူးဟယ်... လွှတ်ပါတော့ အမေ့အတွက် ဆန်ပြုတ်နဲ့ ...အဖေ့အတွက် ထမင်းဟင်းတွေလည်း ပြီးပြီ အဲဒါတွေထုပ်ပြီးရင် ရေမိုးချိုး အ၀တ်အစားလဲ .... ဆေးရုံကို သွားမယ်နော်....”
မျိုးကျော် ဘာမှပြန်မပြောဘဲ ခေါင်းလေးပဲ ငြိမ့်ပြလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို ဆက်နမ်းမယ် လုပ်လိုက်တော့ တင်မိုးနိုင် တချက်လေးပြုံးပြီး မျိုးကျော်ရင်ခွင်ထဲမှ ငုပ်လျိုးရှောင်တိမ်းခါ အိမ်အပေါ်ထပ်သို့ ရေချိုးရန် ထွက်ပြေးတက်သွားတော့တယ်။ တင်မိုးနိုင် ရဲ့ပြုမှုသွားတဲ့ အပြုအမှုလေးနဲ့ ပြေးတက်သွားတာကို ကြည့်ပြီး ပြုံးနေမိတော့တယ်။
တင်မိုးနိုင် ရေချိုးနေတုန်း မျိုးကျော် ရေချိုးခန်းပေါက်ဝတွင် စောင့်နေမိတယ်။ တင်မိုးနိုင် ရေချိုးပြီး ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်လာတော့ မျိုးကျော်ကို မြင်လိုက်တော့ တချက်လန့်သွားပြီး...
“မျိုးကျော် နင် နင်... ရေချိုးမလို့လား ချိုးရေ...”
“သွားလေဟယ်.. သွား...ရေချိုးလို့... ”
မျိုးကျော် ဘာမှပြောမနေတော့ပဲ နောက်မှ တင်မိုးနိုင်ခါးလေးကို ဖက်ထားလိုက်တော့တယ်။ ရေချိုးခန်းထဲမှ ထွက်လာခါစမို့ တင်မိုးနိုင်ကိုယ်ပေါ်မှာ အ၀တ်ဆိုလို့ ရင်လျားလေးဝတ်ထားတဲ့ ထမီရယ် ကိုယ်ပေါ်မှာ ခြုံထားတဲ့ မျက်နှာသုတ်ပ၀ါ တထည်ထဲရယ်ပါ။ တင်မိုးနိုင် မျိုးကျော်ရဲ့လက်တွေကို ဖြုတ်ပြီး အတင်းရုန်းနေပေမဲ့ မျိုးကျော်မှာ သူ့ကို ချုပ်ထားရင်း တန်းလန်းမှ သူ့ရဲ့လည်တိုင်းလေးတွေကို နမ်းလာလို့ ...တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ဒူးတွေက ယိုင်လဲလို့ လာချင်တယ်။
ဆက်ပြီး အတင်းရုန်းနေလို့လဲ မဖြစ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူဝတ်ထားတဲ့ ထမီကိုလည်း မပြေသွားအောင် ထိန်းနေရလို့ မျိုးကျော်ပြုသမျှကို နုရတဲ့ ဘ၀ရောက်နေသလိုပါပဲ။ မျိုးကျော်က နမ်းနေရုံတင်မက သူရဲ့လက်တွေက သူ့နို့တွေမှတဆင့်.. တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ရွှေခရုလေးကိုပါ ထိလာလို့ တင်မိုးနိုင် စိတ်ဆိုးတဲ့ပုံဟန်ဆောင်ခါ..
“မျိုးကျော်... မျိုးကျော်... နင်တော်တော့နော်.... ငါပြောနေတယ်နော်.... ဟာ..... ငါ ပြောနေတာ မကြားဘူးလား...”
မျိုးကျော် တင်မိုးနိုင်ကို သူ့ကိုယ်လေးနဲ့ တွန်းပြီး ကုတင်ဆီသို့ တရွေ့ရွေ့တိုးသွားပြီး ကုတင်နားရောက်တော့ တင်မိုးနိုင် ကုတင်ပေါ်မှာ ထိုင်မိရာမှ သူ့ကို တွန်းလှဲမယ်အလုပ်။
“မျိုးကျော်.... ငါ မလုပ်ချင်ဘူး မျိုးကျော်.. ...ခုလွတ်...”
“နင်ကလည်းဟာ.... ငါတို့ ချစ်သူတွေပဲဟာ..”
“မဟုတ်ဘူးလေ.. နင့်အမေ ခုလိုဖြစ်နေတဲ့ အချိန်.. မကောင်းဘူးဟာ... မကောင်းဘူး.. နင်သေချာ စဉ်းစားကြည့်ပါအုန်း. လွှတ်ဟာ..”
တင်မိုးနိုင်ပြောလိုက်တော့ မျိုးကျော်တချက်တွေဝေ သွားသည်။ ပြီးမှ ကုတင်ပေါ်ခြေရင်းမှာ ထိုင်နေတဲ့ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ဒူးနှစ်ဖက်ကြားထဲ မျိုးကျော် ၀င်ဒူးထောက်ဝင်ရောက်ခါ ငုပ်တုပ်ထိုင်နေတဲ့ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ရင်ခွင်ကို ဆက်လက်ဖက်ထားလိုက်သည်။ မျိုးကျော် တချက်မျက်နှာကို တည်၍ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ မျက်နှာလေးကို မော်ကြည့်ရင်း...
“ဟုတ်ပြီ တင်မိုးနိုင်... နင်ပြောတာ မှန်တယ် ဒီတခါတော့ ငါ နင့်သဘောကို လိုက်လျော့မယ်...ငါကတိပေးတယ် မလုပ်ဖူးဆိုတာ ဒါပေမဲ့..”
“ဘာဖြစ်လဲ ဒါပေမဲ့က....ရေသွား ချိုးတော့ဟာ... ဟိုမှာ အမေတို့ ထမင်းဆာနေရော့မယ်...”
“ငါ တခါလေးတော့ ကြည့်ပါရစေဟယ်နော်.... ”
“ဟိုလေ.... ဆေးရုံမှာ မြင်ခဲ့တဲ့ မြင်ကွင်းမျိုးလေးလေ....ဟီးဟီး ”
“ဟာ.. နင်နော်... မကြည့်နဲ့ဟာ.... နင်မဟုတ်တာ မလုပ်နဲ့ဟာ...”
မျိုးကျော် ပြောလည်းပြော တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ထမီကို လှန်နေလိုက်တာ တင်မိုးနိုင်ထမီက သူ့ဒူးတောင် ကျော်နေပြီလေ။ တင်မိုးနိုင် အတင်းလက်နဲ့ ဖိရုန်းနေပေမဲ့ သူ့ ဒူးနှစ်ဖက်ကြား မျိုးကျော်မှာ ဒူးထောက်ဝင်လျက်သားမို့ ရုန်းကန်ဖို့က ခက်နေပြီ။ မျိုးကျော်ကြည့်ချင်နေတာကို ခွင့်ပြုရမလား ခွင့်မပြုရင် သူစောစောကလို အတင်းလုပ်မှာလည်း ကြောက်ရသလို၊ ခွင့်ပြုမိရင် အဆင့်တက်မှာကို စိုးရိမ်ရမို့ တင်မိုးနိုင် ဝေခွဲ မရဖြစ်နေတုန်း မျိုးကျော်ရဲ့ ဇွတ်အတင်း ထမီကို လှန်နေတာက သူ့ပေါင်နားတောင် ရောက်လာပြီလေ.. တင်မိုးနိုင် သူ့ထမီလေးကို လက်နဲ့ အောက်ကို ပြန်တွန်းချနေပေမဲ့ အချည်းနှီးပါပဲ။ ခက်တာက ထမီကို လှန်မိရင် အောက်မှာ ဘာမှ မ၀တ်ထားတာကြောင့် တင်မိုးနိုင် ခုမှ အရမ်းကို ရှက်နေမိမှာ...
“တင်မိုးနိုင်.. နင်နော်... ငါပြောသလို လုပ်နော်... မဟုတ်ရင် ဆေးရုံကိုတောင် သွားနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး...နင့်ကို ငါကတိပေးပြီးသား... ငါယောက်ျားပါ.. ဒါလေးကြည့်တာ ဘာဖြစ်တာကျလို့... နင့်လက်တွေ ဖယ်စမ်း.....”
မျိုးကျော် အသံက မာပြီးခက်ထန်လာလို့ တင်မိုးနိုင် တချက်ငြိမ်သွားသည်။ သူသိနေပြီလေ.. မျိုးကျော် မွှန်နေပြီဆိုတာ. သူ့ကို ဒါလေးတော့ ခွင့်ပြုလိုက်တော့မှရတော့မယ် ဆိုတာ သဘောပေါက်လာလို့ ရုန်းနေတဲ့ အားလေးတွေကို မသိမသာလေး လျော့ချလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ မျိုးကျော်က ဒူးထောက်ရင်းတန်းလှမ်း တင်မိုးနိုင်ရဲ့ကိုယ်လေးကို သူနဲ့ အနီးဆုံးဖြစ်အောင် ထပ်ဆွဲယူလိုက်တော့တယ်။ တင်မိုးနိုင်မှာတော့ မျိုးကျော် ပြုသမျှ နုရတော့မှာမို့ ထိုင်နေရင်းငုပ်တုပ်လေး မျိုးကျော်ခေါင်းလေးကို ဖက်ထားမိတယ်။ ၀တ်ထားတဲ့ ထမီဆိုတာကလည်း အောက်ကလည်း ပေါင်ထိရောက်နေပြီ ဖြစ်သလို အပေါ်မှာလည်း ကျွတ်နေတာမှ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ နို့တွေတောင် ပေါ်နေပြီလေ။
မျိုးကျော် တင်မိုးနိုင်ရဲ့နို့လေးတွေ အရင် ဆုပ်နယ်နေရင်းမှ သူ့ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို နမ်းလိုက်ပြီ..
“နင် ခဏလှဲလိုက်နော်.... ”
“နင် ..နင်... နင်..ဘာလုပ်မလို့လဲ....”
“ကြည့်ပါလား အောက်ငုံ့ပြီး မြင်နေရတာပဲဟာကို....”
“ဟာ.. နင်က ငုပ်တုပ်ကြီးထိုင်နေတော့ ငါက ဘယ်လို ကြည့်ရမှာလဲ... လှဲဟာ... ခဏလေးရယ်.....”
“နင်နဲ့တော့ ခက်ပါပြီဟာ.... ဒီအတိုင်းလေးဆို ကျေနပ်ပါတော့ဟာ... ”
မျိုးကျော် ပြောပြောနှင့်ပင် တင်မျိုးနိုင် ရင်ကိုတွန်းပြီး ကုတင်ပေါ်လှဲလိုက်တော့ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ရွှေခရုလေးက ဘွားကနဲ့ ပေါ်လာလို့ ကြည့်မယ်လုပ်တော့ တင်မိုးနိုင် ရှက်ရှက်နဲ့ သူ့ ထမီလေးနဲ့ တွန်းအုပ်နေလို့ သူ့လက်တွေကော ထမီပါ မျိုးကျော် စိတ်မရှည်တဲ့ပုံစံနဲ့ ဇက်ကနဲ့ ဆွဲလှန်ပြစ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုကိုင်ပြီး မျိုးကျော်သူ့ဘက်ကို ထပ်ဆွဲယူရင်း ဒူးထောက်လျက်အနေအထားနဲ့ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ရွှေခရုလေးကို သေချာကြည့်နေမိတော့တယ်။ ဆေးရုံတက်ထားတုန်းက ရိတ်ထားတာကြောင့် သူ့ရဲ့ အမွှေးလေးတွေက ပြန်ပေါက်လာပေမဲ့ သိပ်မရှည်သေးတာကြောင့် သူ့ရဲ့ရွှေခရု အက်ကွဲကြောင်းလေးကို ရှင်းလင်းစွာမြင်နေရတယ်။ မျိုးကျော်သူ့ရဲ့ လက်ကလေးနဲ့ အရင်ဆုံး တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ဆီးခုံးလေကို ပွတ်ပေးနေမိတယ်။ ပြီးတော့ သူ့လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ရွှေခရုလေးကြားကို ပွတ်ပေးလိုက်တော့ တင်မိုးနိုင် ကုန်းရုန်းထလာပြီး....
“တော်ပြီဟယ်.. နင်ကလည်း ကြည့်ရုံပဲလေ... ဘာလို့ကိုင်နေတာ... တော်တော့နော်.. သွားမယ်...”
မျိုးကျော် ဘာမှပြောမနေတော့ပဲ.. တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ရင်ဘက်ကို တွန်းလှဲပြီး ရွှေခရုလေးရဲ့ နှုတ်ခမ်းသားတွေကို အရင်ဆုံးပွတ်သပ်ပေးလိုက်တော့။ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ဆီးခုံတွေ တဆက်ဆက်တုန်လို့လာသလို ရွှေခရုလေးကလည်း အရည်တွေ စို့နစ်လို့လာလေပြီ။ လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ပွတ်သပ်ပေးနေရင်းမှ ထွက်လာတဲ့ အရည်လေးကြောင့် ပိုပြီးသွက်လာသလို ခံစားရသလို တင်မိုးနိုင် မျိုးကျော်ရဲ့လက်တွေကို ဖမ်းဆုပ်ကိုင်လာတော့တယ်။ သူကိုင်ထားပုံက တွန်းဖယ်ရုန်းကန်ဖို့ မဟုတ်ပါ။ သူခံစားနေရတာကို အားထားပြီးအရာဝတ္ထုတခုခုကို ဆုပ်ကိုင်ချင်တဲ့ ပုံစံမျိုးဆိုတာ မျိုးကျော်သဘောပေါက်လိုက်လို့ သူ့ရဲ့ ဘယ်လက်ကို ပေးကိုင်ပြီး ညာလက်ကလေးနဲ့ သူ့
ရွှေခရုလေးကို အထပ်ထပ်ပွတ်သပ်ပေးနေမိလို့ တင်မိုးနိုင်မှာ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်လာခါ မျိုးကျော်နာမည်ကိုသာ တသွင်သွင် ခေါ်နေတော့တယ်...။
တကယ်ကိုလှတဲ့ ရွှေခရုလေးပါပဲ။ ပန်းနုရောင်သန်းနေသလို နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကလည်း ပိရိသေသပ်နေလို့ ရှင်းသန့်နေတယ်။ မျိုးကျော် စိတ်မထိန်းနိုင်တဲ့ အဆုံး လက်ကလေးနဲ့ပွတ်သပ်နေတာ ခဏရပ်လိုက်ပြီး သူ့ပေါင်လေးကို ထပ်ကားခါ ရွှေခရုလေးကို သူ့နှုတ်ခမ်းလေးတွေ ကုန်းစုပ်လိုက်တော့......
“မျိုးကျော်... နင်.. နင်.. ဘာလုပ်တာလဲ... နင်.... မဟုတ်တာတွေ လုပ်နေပြီ.. နင်.. ဘုန်းနိမ့်တော့မယ်.. ဟာ... နင်.... တော်တော့.... အား.....”
တင်မိုးနိုင် မျက်လုံးပြူး မျက်ဆံပြူးနဲ့ ကုန်ရုန်းထလာပြီး မျိုးကျော်ရဲ့ ခေါင်းကို အတင်းဆွဲထူနေတော့ မျိုးကျော် တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ရင်ကိုတွန်းထားလိုက်တော့ ပက်လက်လန်ပြန်ကျသွားတယ်။ တင်မိုးနိုင် ကုန်ရုန်းပြီး ထဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ မျိုးကျော်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေက... တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ရွှေခရုလေးကနေ အသေကပ်တွယ်ပြီး ထိရောက် အားကောင်းလှတဲ့ စုပ်ချက်တွေကြောင့် တင်မိုးနိုင်ခမျာ တချက်တချက် အားကုန် ရုန်းထရင်း မျိုးကျော်ရဲ့ ခေါင်းတွေကို ထု ..ကျောတွေကိုထု နောက်ဆုံး သူ့လက်တွေက အင်အားဆိုတာတစက်မှ မရှိတော့ပဲ စိတ်ကြောင့်ပဲလား ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ စိတ်ရဲ့အာသီသ လိုက်လျော့မှုကြောင့်လားမသိ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ခါးတွေက မျိုးကျော်ရဲ့စုပ်ချက် အတိုင်း မြောက်မြောက်တက်ခါ ကော့ကော့ပေးနေမိတော့တယ်။ သူ့လက်တွေကလည်း ပက်လက်လှန်ရင်း မျုိးကျော်ခေါင်းကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်လို့ ထားတော့တယ်။
“အားးးး..မျိုးကျော်ရယ် ... မလုပ်ပါနဲ့ ... အားးးး ...ငါ့ရင်ထဲ တမျိုးကြီး ... အီးးးးး ... မျိုးကျော် ”
တင်မိုးနိုင် သိလိုက်ပြီ မျိုးကျော်ကို မရပ်စေချင်တော့ပေ.. သူတအားကို ပြီးချင်နေပြီလေ။ မျိုးကျော် စုပ်ချက်တိုင်းဟာ ရင်ထဲကိုဆို့တက်လာသလို .... မိမိခါးကို အသားကုန်ပင့်တင်ထားကာ တကိုယ့်လုံးရဲ့ အားတွေကို မိမိရဲ့ ရွှေခရုလေးရှိတဲ့ နေရာကို အားကုန်ညစ်ထုတ် အရောက်ပို့လိုက်ပြီး ......
“၀ိုးးး.... ၀ိုး..... မျိုးကျော်... မျိုးကျော်... မျိုးကျော်... မျိုးကျော်... အားးး ...အ...အ...... အီးးး... မျိုးကျော်... အားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး... အားးးးးးးးးးးး”
ပထမဆုံး သိလိုက်ရတဲ့ အသိကတော့ သူ့ရဲ့ရွှေခရုလေးဝန်းကျင်က တဒုတ်ဒုတ်နဲ့ တချက်ခြင်း ပြီးတဲ့ အရသာပါ။ အဲဒီက တချက် ဒုတ်ကနဲ့ ဖြစ်တိုင်း ခါးကအလိုအလျောက် ဆက်ကနဲ့ ကော့မိတယ်။ ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားတယ် မသိလိုက် အဲထိခုန်နေတဲ့ ခုန်မှုတွေက ရင်ဘတ်ဆီကို ကူပြောင်းလာပြီး တဒိန်းဒိန်း ခုန်နေလို့ ခါးပင်မကော့နိုင်တော့ပဲ မတုန်မလှုပ် ပို့လို့ပက်လက် ပစ်ချလိုက်တော့တယ်။ လောကကြီးနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားသလိုပါပဲ.... ခေါင်းထဲ ရစ်မူးသလိုလို ကိုက်ခဲတာလိုလိုခံစားလိုက်ရလို့ အသာမှေးနေလိုက်တယ်။ ရင်တွေလည်းလှိုက်ခါလှိုက်ခါ မောလွန်းလို့ ဘယ်လိုမှကို ပြန်မထနိုင်တော့ပါ။ ဒါပေမဲ့ အသိစိတ်ကလေး တခုမှာတော့ မျိုးကျော်ရှိနေတာကို သိနေတယ်.... မျိုးကျော်ရယ် နင်လုပ်ချင်လဲ လုပ်တော့ဟာ....
မျိုးကျော်ကတော့ သူလုပ်လိုက်လို့ တင်မိုးနိုင်ဖြစ်သွားတဲ့ ဖြစ်အင်ကို ကျေနပ်နေပေမဲ့ သူ့ဒုတ်ကလည်း တအားကို သန်မာကြီးထွားနေပြီလေ... တင်မိုးနိုင်ကို ကြည့်လိုက်တော့ မတုန်မလှုပ် ပက်လက်ကြီးလှန်နေပြီး ပေါင်ကြီးကိုကားထာလိုက်တာ ရွှေခရုလေးကို ဟာလာဟင်းလင်းကြီး ဖွင့်ထားရက်သား စောစောက မလုပ်ပါနဲ့လို့ ငြင်းနေတဲ့ သူမှဟုတ်ပါရဲ့လားလို့တောင် မထင်တော့ရတော့ပါ။ ခုချိန်မှာ သူတင်မိုးနိုင်ကို စိတ်ရှိလက်ရှိ လုပ်လို့ရပေမဲ့... သူ့မှာ အသိစိတ်တစ်ခုက ၀င်လာတယ်။ တင်မိုးနိုင်ကို ဆက်မလုပ်တော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တင်မိုးနိုင်နဲ့ ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ တင်မိုးနိုင်အနေနဲ့ ပထမဆုံးဆိုတော့ သူ့ကို အမှတ်ရနေစေချင်တယ်။ ခုကြည့်ပါအုန်း မိန်းမောနေလိုက်တာ။ ခုချိန်သူ့ကို ငါလုပ်ရင်တောင် အပျိုစင်ဘ၀ကိုတော့ ရပါရဲ့ အရသာက သူရောကိုယ်ပါ တ၀က်လောက်ပဲ ခံစားရမှာမို့ မလုပ်တော့ဘဲ သူ့ရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေသာ သွားနမ်းနေမိတော့တယ်။
တင်မိုးနိုင် အသံတောင်ထွက်ပြီး ပြန်မဖြေနိုင်တော့ပါ .... မျက်လုံးလေးမှေးစင်းပြီး မျိုးကျော်ကို အသာလေးသာ ခေါင်းငြိမ့်ပြ လိုက်တော့သည်။ အိမ်မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်က ငါမှ ဟုတ်ပါရဲ့လားလို့ တင်မိုးနိုင်တွေးတွေးပြီး အရှက်လွန်နေမိလို့ ... မျိုးကျော်ကိုတောင် လှည့်ပင်မကြည့်ရဲ့ပေ။ မျိုးကျော်က သူ့ကားသူမောင်းနေတယ် ဆိုပေမဲ့ တင်မိုးနိုင် မလုံမလဲ ဖြစ်နေတာကို သတိထားမိတာကြောင့် တင်မိုးနိုင်အနေအထိုင်ခက်အောင် မလုပ်ချင်လို့ လှည့်မကြည့်ပဲ ကားကိုရှေ့တူရူ့မောင်းနေသည်။ ဒါပေမဲ့ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေက မပြုံးပဲ မနေနိုင်အောင်ပါပဲ။ တချက်တချက် တွေးလေ ရယ်ချင်တာမို့ အသံတချက်ထွက် ရယ်မိလိုက်လို့ မသိမသာ ပြန်ထိန်းလိုက်တယ်။
ဟယ်တော်... မျိုးကျော်စောစောကရယ်တာ ငါ့ကို ဖြစ်မယ်. တင်မိုးနိုင် ရှက်ရပါပြီ။ မျိုးကျော်က အမေတို့ဆီကို သွားရအောင်လို့ပြောတုန်းက သူကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်လေးနဲ့ အားယူပြီး ကုန်းထချင်ပေမဲ့ ချက်ချင်း ထမရတာကြောင့် ခဏမှိန်းနေရတာကို ပြန်တွေးမိတိုင်း အရမ်းကိုရှက်မိသလို မျိုးကျော်ရဲ့ အယုအယအကိုင်အတွယ်လေးတွေကို သူဒီတသက်မမေ့ နိုင်တော့ပါ။ သူမျိုးကျော်ကို အရင်ကထက် ပိုပိုပြီး ချစ်လို့လာပြီလေ။ သူအရင်ထဲကလည်း မျိုးကျော်ကိုချစ်တာမို့ အရင်ကထက် မျိူးကျော်ရဲ့ ရင်ခွင်ကြား တိုးလို့သာနေချင်တဲ့ စိတ်တွေ တဖွားဖွားပေါ်လို့လာတော့တယ်။ နောက် ဘာပဲပြောပြော မျိုးကျော်ဟာ ကတိတည်တဲ့ သူတယောက်ဆိုတာလဲ သူသိလိုက်ရတယ်လေ။ တင်မိုးနိုင် ကိုယ့်ကိုကို မဟန်နိုင်တော့ပဲ ပိုးလို့ပက်လက် မိန်းမောနေချိန်မှာ သူလုပ်ချင်သလို လုပ်လို့ရသားနဲ့ သူရဲ့ကတိစကားလေးကို တန်ဖိုးထားတဲ့သူကို ပိုပြီးလေးစားယုံကြည်လာတယ်။
တွေးနေရင်း ကားလေးက အထူးကုဆေးခန်းရှေ့ ရောက်လာလို့လာလို့ မျိုးကျော်နဲ့ နှစ်ယောက်သား အမေရှိတဲ့ အခန်းကို မျိုးကျော်နဲ့ အတူထမင်းချိုင့်လေးဆွဲပြီး ၀င်သွားတော့သည်။ မျိုးကျော်နဲ့ တင်မိုးနိုင် နှစ်ယောက်သား အပြုံးလေးတွေနဲ့ ၀င်လာတော့ မျိုးကျော်အမေ တအားကို ပျော်သွားဟန်တူပါတယ်။ မျက်ရည်လေးတွေတောင် ၀ဲပြီးကြည့်လို့နေတာကို တင်မိုးနိုင် မရိပ်မိပေမဲ့ မျိုးကျော်သိလို့ စိတ်ထဲမကောင်း။ သူ့ လုပ်ရပ်ကိုလည်းနောင်တရမိနေတယ်....
“အယ်... သားနဲ့ သမီးကို ဒီိလိုလေး မြင်ရတော့ အမေ စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာဟယ်..... ................. သမီး...”
“ရှင်.. အမေ..... ”
“သားက သမီးကို ကောင်းကောင်း ချော့ရဲ့လား.... ”
တင်မိုးနိုင် ပြန်မဖြေပဲ ရှက်ပြုံးလေနဲ့ ရယ်ပဲရယ်နေတော့တယ်။..နောက် ယူလာတဲ့ ထမင်းချိုင့်တွေကို ရောင်ရမ်းဖွင့်ရင်း...
“အမေ...ဒါ အမေ့မှာတဲ့ ဆန်ပြုတ်လေး.... ဒါက ဆန်ပြုတ်သက်သက်ကြီးဆို စားမကောင်းမှာစိုးလို့ ..ငါးကြင်းကို သေချာကြော်ထားတယ် ဆီမပါအောင် သေချာစစ်ထားတယ် အမေ.. ဒါက... ငါးဖယ်ငါးဆုပ်ကြော် အမေက အစပ်ကြိုက်တော့ ဂျင်းလေးနည်းနည်း လေးလေးလေ ထည့်ထားတယ်။ နောက် ဆန်ပြုတ်ထဲ ဆီကျက်ကို တခါထဲ ထည့်မလာဘူး သီးသန့် အပြင်မှာ လုပ်ထားတယ်.. အမေက ဆီရှောင်တော့လေ အမေ့စိတ်ကြိုက်ထည့်စားရအောင်ပေါ့ .... အော်.. အဖေ့အတွက် လည်းချက်လာတယ် ... အပေါ်ချိုင့်က ခရမ်းသီးအစာသိပ်... ဒုတိယချိုင့်က ၀က်သားကို ပုန်းရည်ကြီးနဲ့ချက်ထားတာ... အောက်ဆုံး အဖေကြိုက်တဲ့ သီးစုံ ပဲကုလားဟင်းလေ.... ဟီးးးး... စားကြည့်ပါအုန်း အရသာရှိမယ် ထင်တာပဲ.....”
တင်မိုးနိုင်ရဲ့ အပြုအမူတွေကို မျိုးကျော် အမေနဲ့ အဖေလုပ်သူ တွေဝေငေးမောကြည့်နေရင်းမှ...
“ဟယ်တော်.. သမီးချက်ရင် ဘာမဆိုကောင်းမှာပါ သမီးရယ်..... ဖေကြီးရယ် ... ကျွန်မတို့တော့ အိုဇာတာကောင်းပြီ ထင်ပါတယ်တော်... နော်..”
“ဟုတ်တယ်... မေကြီးရယ်.... သမီးလေးက လိမ္မာသလို အိမ်မှုကိစ္စကလည်း နိုင်နင်းတယ်.. ဖေကြီးတို့ကံကောင်းတာပဲ.. ဒါပေမဲ့..”
မျိုးကျော့်အဖေ ပြောနေတာကို ရပ်ပြီး မျိုးကျော်ကို မျက်နှာထားခပ်တင်းနဲ့ လှမ်းကြည့်နေတာမို့ ... မျိုးကျော် ရယ်ပြုံးနေရာမှ မျက်နှာပိုးသတ်နေတုန်း...
“ဒီကောင့်ကို ငါ... ကြည့်နေတာ... နောက်တစ်ခါ သမီးမျက်ရည် ကျလို့ကတော့ လာမယ်.. ဒီလက်သီးကို ကြည့်ထား.. ဘယ်အသက်အရွယ်မရွေးဘူး....”
“ဟာ အဖေကလည်း.... သား....”
“တော်တော့ ဟေ့ကောင်... မင်း....အသံမကြားချင်ဘူး... ဘာလဲကွ ငါတို့ မင်းကို သူများသားသမီးကို ရိုက်နှက်ဖို့ အသားနာအောင်လုပ်ဖို့ ဆုံးမခဲ့လားကွ..... ကြီးမိုက်ဆိုတာ ဒီလိုကောင်မျိုးနေမှာ.... ”
“ဟုတ်တယ်နော်.. သား... အမေလည်း မကြိုက်ဘူး... နောက်တခါ သမီးကို စိတ်ဆင်းရဲအောင်မလုပ်ပါနဲ့..... အမေ့ကို သနားပါအုန်း....”
မျိုးကျော် အသာပါးစပ်လေးပိတ်နေပြီး တင်မိုးနိုင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ တင်မိုးနိုင် ပြုံးပြီးသူ့ကို ကြည့်နေလို့ ... မျက်နှာကို မဲ့ပြလိုက်သည်။ တင်မိုးနိုင်ကတော့ မျိုးကျော် အမေကို သူကိုယ်တိုင် ဆန်ပြုတ်ပူပူလေးကို လေမှုတ်ပေးပြီး တယုတယ တိုက်လို့နေသည်။ မျိုးကျော် စိတ်ထဲမှာ တင်မိုးနိုင်ကို ကျေးဇူးတင်မိနေတယ်။ ဒီအသက်အရွယ်ထိ သူအမေ့ကို မပြုစုဖူးပါ။ ခုတော့ သူ့အစား အမေ့ကို ပြုစုနေတာတွေရတော့ ရင်ထဲ အေးချမ်းနေသလို အမေပြောတဲ့ ချွေမကောင်း မိန်းမကောင်းဆိုတာ သူ မျက်စိရှေ့မှာတွေ့နေရတော့ သူရင်ထဲမှာ တင်မိုးနိုင်ကို ချစ်လာမိတော့တယ်...
“ကဲ ...သားတို့ ပြန်တော့နော်.. အမေတို့ မနက်ဖြန် မနက်... ဆေးရုံကဆင်းမယ် အဲဒီကျမှာလာတော့နော်...”
ဒီလိုနဲ့ တင်မိုးနိုင်နဲ့ မျိုးကျော် အမေတို့ကို ဆေးခန်းမှာ ထားခဲ့ပြီး ပြန်လာခဲ့တော့တယ်။ ပြန်လာတဲ့ လမ်းတစ်လျောက်လုံး နှစ်ယောက်သား တိတ်ဆိတ်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တယောက်စကားမပြောပဲ နေတော့တယ်။ တင်မိုးနိုင် စိတ်ထဲ အိမ်နဲ့ နီးလာလေ ရင်တွေ ပိုခုန်လို့လာသလို... မျိုးကျော်မှာ လူပျိုစိတ်တွေ တင်မိုးနိုင်ကို သူဆေးရုံမှာ စတွေ့တုန်းကလို့ စိတ်မျိုးတွေ အသစ်ဖြစ်လာလို့ ရင်တွေတအားခုန်လာသလို အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ..... တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ရွှေခရုလေးနဲ့ ဘယ်လိုနှစ်ပါးသွားရမလည်း ဆိုတာကို တွေးရင် ရင်တွေခုန်လာတော့တယ်...။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဘာစကားပြောရမှန်းမသိ။ မျိုးကျော်ကတော့ တင်မိုးနိုင်ကို မိတ်မသုန်ကြီးကြည့်နေတာကြောင့် တင်မိုးနိုင် ယောင်လည်လည်နဲ့ မီးဖိုချောင်ထဲ တန်းဝင်သွားသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မရှိပဲ ဒယ်အိုးဒန်ခွက်တွေကို လျောက်လှန်လှော နေမိတယ်။ ပြီးတော့ မျိုးကျော်ဘက်လှည့်ခါ...
“နင်... ဟာဟင်းကြိုက်လဲ... ဘာချက်ရမလဲ... ”
“ဘာမှမချက်နဲ့... မားမီးခေါက်ဆွဲပဲ စားမယ်...”
မျိုးကျော် နှုတ်က လွတ်ခနဲ့ ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့် ဇင့်ကို တချက် သတိရသွားပြီး စိတ်ထဲ မကောင်းသလို ဖြစ်သွားသည်။ ခွင့်လွတ်ပါ ဇင် ရယ် နောင်ဘ၀ဆိုတာ ရှိခဲ့ရင် ကိုကြီး ဇင်နဲ့ ဆုံဆည်းပါရစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ မျိုးကျော်ရင်ထဲ ဇင့်အကြောင်း ထပ်ခါထပ်ခါ ၀င်လာတော့ သူ့နှလုံးသားက အရမ်းကို ခံစားရလေပြီ....။
“နင်ဘာဖြစ်လို့လဲ ဟင်.... မျက်နှာက ချက်ချင်းညိုးသွားလို့....”
တင်မိုးနိုင်က မျိုးကျော်လက်မောင်းလေးကို ကိုင်ပြီး မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ပြောလာတော့ မျိုးကျော် အသိဝင်လာပြီး...
“ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး.... နင်ဘာမှ မချက်နဲ့လေ... မာမီးခေါက်ဆွဲပဲ စားရအောင်လေဟာ... အချိန်တွေ ပုပ်တယ်....”
“အမ်.... ဘာအချိန်တွေ ပုပ်တာလဲ....”
“ဟီးးး.... ဟိုလေ... ချစ်ဖို့လေ....”
တင်မိုးနိုင် နှုတ်ခမ်းလေးစူပြီး တဖက်ကိုလှည့်ထွက်မယ် အလုပ်... မျိုးကျော်က တင်မိုးနိုင်ကို လက်လှမ်းဖမ်းဆွဲပြီး သူ့ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲဖက်ထားတော့... တင်မိုးနိုင် မရုန်းလိုက်ပါဘူး။ အလိုက်သင့်လေးပဲ မျိုးကျော်ရင်ခွင်ထဲ ခိုဝင်လိုက်လေတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မျိုးကျော်ရဲ့ အနမ်းလေးတွေ အကြင်နာအယုယလေးကို သူထပ်မံခံယူချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်.... အမြင့်ဆုံး အဆင့်ကျော်တဲ့အထိ သူလုပ်ဖို့တော့ မလုပ်ချင်ပါ။ စိတ်ကူးထဲ ရှိပေမဲ့ကြောက်နေမိတယ်။ သူငယ်ချင်း မိန်းကလေးတွေ ပြောတဲ့ အပျိုရည်ပျက်ရတာ သေလောက်အောင် နာကျင်ရတယ် ဆိုတဲ့ စကားက သူနားထဲ အလိုလိုရောက်လာတော့ သူအသည်းထိတ်အောင် ကြောက်လှတယ်... သူအပျိုကြီး ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေမှာ ဒီစကားက ထိပ်ဆုံးပါနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခုတော့ မျိုးကျော်ရဲ့ အပြုစု အယုယတွေကြား ရုန်းမရလို့သာ.. နောက် ... မျိုးကျော်ကို အရမ်းနဲ့ ချစ်မိလာတော့ သူ့မှာ ဘယ်လို ရုန်းထွက်ရမလဲ မသိတော့အောင်ပါပဲ...။
မျိုးကျော်ကတော့ တင်မိုးနိုင် နှုတ်ခမ်းတွေ ညင်သာယုယစွာနမ်းနေသည်။ သူ့လက်တွေကလည်း တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ရင်သားနို့အုံလေးကို ညင်သာစွာ ဆုပ်နယ်ပေးနေတာမို့ တင်မိုးနိုင်ဆက်မနမ်းနိုင်တော့ဘဲ မျိုးကျော်ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဖက်ထားလို့ မျိုးကျော်က တင်မိုးနိုင်ကို တဖက်ဆွဲလှည့်ပြီး တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ကျောကို သူ့ရင်ခွင်ထဲ လှည့်ဆွဲသွင်းလိုက်သည်။ သူ့လက်တွေကတော့ တင်မိုးနိုင် နို့တွေက မခွာပဲ အဆက်မပြတ် ဆုပ်နယ်ပေးနေတော့ တင်မိုးနိုင်ဆီက ငြီးသံသဲ့သဲ့လေး ထွက်လို့လာတယ်။ မျိုးကျော်ရဲ့ ဒုတ်က သန်မာလာလို့ တင်မိုးနိုင်တင်ကြား အလိုက်သင့်လေး ဖိကပ်တွန်းထားတာကို ခံစားမှုအတိုင်းလွင့်မျောနေတဲ့ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ တင်တွေက ပြန်တောင့်တွန်းခံထားသည်။ မျိုးကျော်နောက်ကနေပဲ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကိုလှမ်းပြီး စုပ်နမ်းရင်း သူ့လက်တွေက တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ရွှေခရုလေးကို ဖိကပ်ပြီး အသာအယာ စတင်ပွတ်ပေးလိုက်တော့ တင်မိုးနိုင် မျက်လုံးလေးဖွင့်ပြီး မျိုးကျော်ကို ကြည့်နေပေမဲ့ မျိုးကျော်ရဲ့ တရစပ် အနမ်းတွေ၊ ထမီခံနေပေမဲ့ ရွှေခရုလေးကို ပွတ်သပ်ခြင်းခံနေရတာတွေကြောင့် တင်မိုးနိုင် မျက်လုံးလေး ပြန် မှေးစင်းနေမိတော့တယ်။ တင်မိုးနိုင် မျိုးကျော်ရဲ့ ပွတ်သတ်မှုကို ခံကောင်းနေတုန်း လူတကိုယ်လုံး ရိပ်ခနဲ့ ဖြစ်သွားသလို မူးလဲသွားသလို ခံစားလိုက်ရတယ်။ တကယ်တမ်းမှာတော့ သူ မူးလဲတာ မဟုတ်ပါ။ မျိုးကျော်က သူ့ကိုပွေ့ချီထားခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
“မရဘူး ခုချဟာ.... ခုချ...”
“ချမယ်.. ချမယ်..ခုကို ချမယ်....ဟီးးးး”
မျိုးကျော် နောက်ပြောင်ပြောဆိုပြီး တင်မိုးနိုင် ရုန်းကန်နေတဲ့ ကြားက အိမ်အပေါ်ထပ်သို ခေါ်ဆောင်သွားတော့သည်။ မျိုးကျော်က တင်မိုးနိုင်ကို ကုတင်ပေါ်တင်လိုက်တော့ တင်မိုးနိုင် ကုတင်ပေါ်က ပြေးဆင်းပြန်လို့ မျိုးကျော် တင်မိုးနိုင်ကို လှမ်းအချုပ်... တင်မိုးနိုင် ပျာပျာသလဲ.... ခါးလေးကိုရို့ပြီး မျိုးကျော်ကို သူ့လက်တွေနဲ့ တောင့်ကန်တွန်းထားပြီး တိုးလျိုး တောင်းပန်တဲ့ ပုံလေးနဲ့ .....
“မျိုးကျော် ငါတို့ အဲဒါ မဖြစ်ဘူးနော်... ငါ မဖြစ်ဘူး....”
“နင်.... ကလည်းဟာ... ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး... ဒါမျိုးကတနေ့ ကြုံရမှာပဲ ဟာကို....”
“မဟုတ်ဘူး ...ငါ မဖြစ်ဘူး... အဲဒါလုပ်လို့ မရဘူး.... ဒီလောက်လေးနဲ့ တော်ပါဟယ်နော်.. ငါ မဖြစ်ဘူးဟာ....”
“အဲဒါဆိုလည်း နေ့လည်ကလိုမျိုးလေး လုပ်ချင်တယ်ဟာ...”
“ဟင့်အင်း.. ငါသိတယ်.. နင်... နင်... နောက်ကျရင်...”
မျိုးကျော် တင်မိုးနိုင်ကို ကုတင်ပေါ် တွန်းလှဲဖိကပ်ခါ သူ့ရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို စတင်နမ်းလိုက်ပါတော့သည်။ မျိုးကျော် ကြင်နာယုယစွာ နမ်းလိုက်တော့လည်း တင်မိုးနိုင် ငြိမ်သက်ပြီး သူ့နှုတ်ခမ်းလေတွေကို သက်ဝင်လှုပ်ရှားခါ ပြန်တုန့်ပြန်နေသည်။ ပြီးတော့မှ မျိုးကျော်ရဲ့ အနမ်းတွေကို တင်မိုးနိုင် ညင်သာစွာ တွန်းဖယ်ရင်း ..
“ချစ်တယ်လေဟာ အရမ်းကိုချစ်တယ်... ငါ့နှလုံးသားထဲကကို ချစ်တာပါဟာ...”
“ဟိုလေ... အရမ်းကြီး နာအောင်မလုပ်နဲ့နော်....ငါ ရင်တွေ ခုန်လိုက်တာဟယ်.. ”
“မနာပါဘူး ဟယ်.... ငါ နင့်ကို မနာအောင် လုပ်မယ်လေ... ဖြည်းဖြည်းချင်းလေး လေ...”
“နင်က နာတယ်လို့ သာပြောလိုက် ငါရပ်ထားမယ်... ”
တင်မိုးနိုင် “ ဟုတ် ” လို့ ပြောလိုက်တဲ့ ပုံလေးက ပြုံးသဲ့သဲ့လေးရယ်ပါ။ တကယ်ကို ချစ်စရာကောင်းသလို ကလေးလေး တယောက်လိုပါပဲ။ မျိုးကျော် တင်မိုးနိုင်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို ကြင်နာစွာ စုပ်နမ်းလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့လည်ပင်းလေးကို လျောဆင်းနမ်းရင်း သူ့အကျီလေးတွေကို ဖြည်းညင်းစွာ ချွတ်နေတော့ သူရှက်ရှက်နဲ့ မျိုးကျော်ကို အတင်းဖက်ထားပြန်တော့တယ်။ မျိုးကျော်ကတော့ တင်မိုးနိုင်ဖက်ထားတဲ့ ကြားက တင်မိုးနိုင်အကျီကို ရအောင် ချွတ်နေတော့တယ်။
အကျီလေး ကျွတ်သွားတော့ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ မို့မောက်နေတဲ့ ရင်သားတွေက ဘော်လီလေးနဲ့ ကာထားလို့သာပေါ့ မို့မောက်လို့ပြီး ပွင့်ထွက်ချင်နေလာ မှတ်ရသည်။ မျိုးကျော် ရီဝေနေတဲ့ အကြည့်လေးနဲ့ တင်မိုးနိုင်ကို တချက်ကြည့်ပြီး သူ့ရင်သားတွေကို ဆုပ်နယ်ခါ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ဗိုက်ကလေးနဲ့ အတူ ချက်ကလေးကို နမ်းလိုက်သည်မှာတော့ တင်မိုးနိုင်မခံနိုင်တော့ပဲ ခါးလေးကော့တက်ခါ ငြီးငြူနေတုန်း ကော့တက်နေတဲ့ ခါးအောက် လက်ကလေး အသာလျိုခါ ဘလာစီယာကြိုးလေးကို ဖြုတ်လိုက်တော့တယ်။ တင်မိုးနိုင် မသိပါ။ သိနိုင်မှာလည်း မဟုတ်ဘူးလေ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဒုတိယ အကြောအချဉ်နေရာကို.. စုပ်နမ်းလိုက်တော့ သူ့ ဘလာကြိုးလေးကို ဖြုတ်လိုက်တဲ့ အထိအတွေ့ကို မခံစားလိုက်ရဘူးလေ။ တင်မိုးနိုင်ရဲ့.. ဘလာကြိုးလေး ပြုတ်သွားတော့မှ သူ့ရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေ ရှိရာကို ပြန်ဆန်တက်ရင်း နမ်းလိုက်တော့တယ်။
ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ သေချာ အချိန်အကြာကြီး ကြင်ကြင်နာနာ ယုယုယယ နမ်းရှုပ်မှု ခံလိုက်ရတော့ ဒီအရသာလေးကို တကယ်မြတ်နိုးမိတယ်။ သူ့နှုတ်ခမ်းလေးကို တချက်စုပ်နမ်းလိုက်တိုင်းမှာ လူတကိုယ်လုံးမှာ လေထဲလွင့်သွားသလိုလို၊ တကိုယ်လုံးရဲ့ အင်အားတွေက ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းလေးကနေ သူ့နှုတ်ခမ်းလေးထဲ ထည့်ပေးလိုက်ရသလိုပါပဲ။ တယောက်နဲ့တယောက် ကျင်နာမှု အမြင့်ဆုံးအချိန်ထင်မိပါတယ်။ ဘယ်လိုစုပ်နမ်းနမ်း ဘယ်လိုမှကို ၀နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သူ့ကို ကျေးဇူးတင်မိတယ်။ တကယ်တမ်းကြတော့ သူဟာတကယ်ကြင်နာတတ်တဲ့ သူပဲ။ သူ့ကိုရတာ ငါ တအားကံကောင်းတဲ့ မိန်းမတယောက်ပဲ။ တွေးနေရင်း မျိုးကျော်ကို ရင်ထဲအတင်းဆွဲဖက်ခါ နှုတ်ခမ်းတွေကို အားရပါးရ စုပ်နမ်းနေမိတော့တယ်။ “ချစ်တယ် မျိုးကျော်ရယ်. နင်ဟာ..ငါ့ဘ၀ပါ.. ငါ့ကိုတော့ ဒီဘ၀ထဲမှာ တယောက်ထဲတော့ထားမခဲ့နဲ့နော်.. ငါသိပြီး ဒီဘ၀မှာ နင်မရှိရင် ငါဘာမှ လုပ်မရတော့ဘူး.....” ။
မျိုးကျော် နမ်းနေရင်းမှ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ဘလာလေးကို အသာဆွဲဖယ်လိုက်တော့... တင်မိုးနိုင် နှုတ်ခမ်းချင်းတပ်ပြီးနမ်းနေရင်းမှ မျက်လုံးအပြူးသားလေးနဲ့ ဖြစ်နေပြီးဘယ်လို ဖြုတ်သွားတာလဲ အတွေးနဲ့ တွေးနေတုန်း မျိုးကျော်ကတော့ တင်မိုးနိုင်လက်တွေမှတဆင့် ဘလာကို အောင်မြင်စွာ ဖြုတ်လိုက်ပြီလေ။ တင်မိုးနိုင် သူ့ရင်ဘက်လေးကို အုပ်ပြီး မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီး ရှက်နေတုန်း မျိုးကျော် တင်မိုးနိုင်ရဲ့ လက်တွေကိုဖယ်ပြီး တင်မိုးနိုင်ရဲ့ နို့လေးတွေကို ညင်သာစွာစတင် စုပ်နမ်းလိုက်တော့တင်မိုးနိုင်မှာ မျိုးကျော်ရဲ့ ခေါင်းက ဆံပင်တွေကို ဆုပ်ကိုင်ခါ အသံပေါင်းစုံဖြင့်ငြီးငြူနေမိတော့တယ်။ မျိုးကျော်ကတော့ သူဇောနဲ့ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ နို့တွေကို စုပ်နမ်းနေရာမှ သူ့ထမီလေးကို ညာလက်လေးဖြင့် အသာဖြေချပြီး...အောက်သို့ အပီးတိုင် ဆွဲချွတ်လိုက်တော့တယ်။ တင်မိုးနိုင်ကတော့ သူ့နို့တွေကို မျိုးကျော်ရဲ့ စုပ်နမ်းမှုဒဏ်ကို ကြံကြံခံ အသက်မထွက်ရုံတမယ် ..ခံစားနေရလို့ သူ့ထမီကို ချွတ်လိုက်ကိုတောင် မသိလိုက်ပြန်ပါဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ တင်မိုးနိုင်ကိုယ်မှာ အ၀တ်အစားရယ်ဆိုလို့ သူ့ရဲ့ အောက်ခံဘောင်းဘီ သေးသေးလေးသာ ကျန်ပါတော့တယ်။ မျိုးကျော် သူ့နို့တွေကို နမ်းနေရင်းမှ နမ်းနေတာ ရပ်ပြီး... တင်မိုးနိုင် ပေါင်ကြားထဲဝင်ပြီး ဒူးထောက်ထိုင်ခါ တင်မိုးနိုင်ကို သေချာကြည့်ခါ သူအပေါ်အကျီကို ညင်သာစွာ ချွတ်နေတော့တယ်။
ခုမှ သတိထားမိသည် သူ့ကိုယ်မှာ အ၀တ်ဆိုလို့ အောက်ခံဘောင်းဘီသေးသေးလေးသာ ရှိတော့လို့ တင်မိုးနိုင် သူ့ရင်ဘက်လေးကို လက်လေးနဲ့ ကာရမလိုလို သူ့ဘောင်းဘီလေးကိုပဲ ကိုင်ဖုံးရတော့မလိုလို ဖြစ်နေပြီး မျိုးကျော်ကို ကြည့်လိုက်တော့ သူ့ကို စိမ့်စိမ့်ကြီးကြည့်ခါ အကျီကို ဖြည်းညင်းစွာချွတ်နေတော့ စိတ်ထဲ မလုံမလဲ အားငယ်လာတာလိုလို သူငါ့ကို လုပ်တော့မှာလားဆိုတဲ့ အသိတွေ ၀င်လာတယ်။ မျိုးကျော် အကျီချွတ်ပြီးနောက် သူပုဆိုးကို ပါချွတ်လိုက်တာမို့ သူ့ရဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီကို မြင်လိုက်ရတော့တယ်။ “ဟယ်.... ကြည့်အုန်း.. ဒုက္ခပဲ .ဟယ်..”.. မျိုးကျော် ဘောင်ဘီလေးမှာ ဖောင်းတင်းပြီး အချောက်လိုက်ကြီး ပေါ်နေပါလား.. ငါ ဘယ်လို လုပ်ရပါ့မလဲဟယ်.. ငါကြောက်တယ်။ တင်မိုးနိုင် ကုန်းရုန်းပြီး ထမယ်လုပ်တော့... မျိုးကျော် သူ့ကိုယ်လေးနဲ့ ဖိထားရင်းကိုယ်ချင်းထပ်ထားလိုက်သည်။
ပြီးနောက် တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ပေါင်တွေကို ဆွဲမပြီး ဘောင်းဘီလေးခံထားပေမဲ့ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ရွှေခရုလေးကို သူရဲ့ ဒုတ်နဲ့ပဲ ဖိတွန်းထိုးလိုက်တော့ တင်မိုးနိုင် မျိုးကျော်ကို အံ့သြခြင်း ထိတ်လန့်ခြင်းလားမသိ မျက်လုံးလေး အ၀ိုင်းနဲ့ ကြည့်လို့နေတော့တယ်။
မျိုးကျော် ကတော့ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေ နို့တွေကို စုပ်နမ်းပြီး တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ဘောင်ဘီလေးကို ညင်သာစွာ ဆွဲအချွတ် တင်မိုးနိုင်သူ့လက်လေးနဲ့ သူ့ဘောင်းဘီလေးကို လှမ်းဆွဲထားပေမဲ့ မမှီလိုက်ပါ။ သူ့ဘောင်းဘီလေး ပေါင်လောက်ရောက်နေပြီလေ။ အတင်းကုန်းထပြီး ပြန်ဆွဲမယ် လုပ်ပေမဲ့ မျိုးကျော်က သူ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ကာပြီး ချွတ်လိုက်တာမို့ လုံးလုံးကျွတ်သွားပြီးမှ မျိုးကျော် သူ့ရဲ့ ဗိုက်သားလေးတွေကတဆင့် ရွှေခရုလေးကို ၀န်းကျင်ကို စတင်နမ်းလေတော့တယ်. တင်မိုးနိုင် မရုန်းချင်တော့ပါ ။ သူ့ရဲ့ အနမ်းတချက်တိုင်းဟာ မီးစနဲ့ ထိုးသလိုလို ရေခဲနဲ့ပဲတို့သလိုလိုနဲ့ “.အယ်.. အား. ကြည့်အုန်း” သူ့ရဲ့ ပေါင်အရင်းသားလေးတွေကို နမ်းနေလိုက်တာ ပေါင်ကို ပြန်စေ့ချင်ပေမဲ့ သူက အားကုန်ဖြဲထားတော့ သူ့ရဲ့ ရွှေခရုလေးမှာ ဟာလာဟင်းကြီးရယ်ပါ။
မျိုးကျော်ကတော့ မျက်လုံးလေး အသာမှေးစင်းပြီး မမှီမကန်း ဖင်နားအခြေအထိ နမ်းနေတော့တယ်။ တင်မိုးနိုင် ဘာတွေပြောနေတယ်တော့ မသိ။ သူပြောသာပြောနေပေမဲ့ မျိုးကျော်လုပ်သမျှကို မရုန်းကန်တော့ပဲ ငြိမ်ခံနေတော့တာမို့ မျိုးကျော် လုပ်ချင်သလိုသာ ...လုပ်နေတော့တယ်။တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ရွှေခရုလေးကတော့ မို့မောက်ခါ အရည်လေးစို့နေ၍ တဆက်ဆက်တုန်နေတော့သည်။ တချက်တချက် ဆက်ကနဲ့ တွန့်ခနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့ တင်မိုးနိုင်ကို သနားလာမိသည်။ ယခုအချိန်ထိရွှေခရုလေးကို မထိသေးဘဲ ရွှေခရုလေးရဲ့ ၀န်းကျင်ကိုသာ စုပ်နမ်းမွှေနှောက်နေရာမှ မျိုးကျော်အနမ်းတွေ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ဆီးခုံးလေးတ၀ိုက်ကို စတင်နေရာယူနမ်းစုပ်နေပြန်တော့တယ်။ တင်မိုးနိုင် ခေါင်လေးထာင်ကြည့်လာပြီး မျိုးကျော်ခေါင်းလေးကို ကိုင်လာတော့သည်။ ဆီးခုံးလေးကို စုပ်နမ်းနေရာမှ ခဏရပ်ပြီး တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ရွှေခရုလေးကို သေချာစေ့စေ့စပ် ကြည့်နေမိတယ်။ ဒါကို တင်မိုးနိုင် မြင်၍ မကြည့်ဖို့ ပြောနေတာကိုဂရုမစိုက်ပဲ လက်ကလေးနဲ့ ရွှေခရုလေး၏ နှုတ်ခမ်းသားတွေကို ပွတ်သပ်နေရင်းမှ ရွှေခရုအစိလေးကို စတင်စုတ်လိုက်တော့ရာ မျိုးကျော်စိတ်ထဲ မကောင်းတဲ့ အနံ့သက်လား ..ကောင်းတဲ့ အနံအသက်လား ဝေခွဲမရ။ မိမိနှုတ်ခမ်းအစုံက တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ရွှေခရုလေးကို အကုန်ပိပိရိရိနေရာယူ ကပ်ပြီးနေတော့ အေးသလိုလို နွေးသလိုလိုခံစားလိုက်ရပြီး ရွှေခရုလေးရဲ့ ညာဘက်နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေက လျောဆင်းလိုက်တော့တယ်။ အရမ်းလှပတဲ့ အသားအရေလေးရယ်ပါ။ ဆက်ကနဲ့ နှုတ်ခမ်းသားလေး တဖတ်ကို မိမိနှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ စုပ်ဆွဲယူလိုက်ရာ ရွှေခရုနှုတ်ခမ်းသားလေးက အိတွဲပြီး အရှည်လိုက်ကလေး ဆန့်ထွက်လို့လာပြီး တချက်လွှတ်လိုက်တော့ သရေလေးလို ပြန်ချုန့်သွားပြီး ဖြည်းညင်းစွာပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ ညာဘက်နှုတ်ခမ်းလေးကို စုပ်ပြီး ဘယ်ဘက်ကို ပြောင်းကာ.. ညင်သာယုယစွာ ထပ်မံစုပ်လိုက်တော့ ..တင်မိုးနိုင်ရဲ့ လက်တွေကမျိုးကျော်ခေါင်းကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ဆုပ်ကိုင်နေတော့တယ်။ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ငြီးငြူသံတွေက တိတ်ဆိတ်မှုကို ဖြိုခွင်းလာတယ်.... တင်မိုးနိုင်ရဲ့ စိတ်တွေက တအားကြွလာလို့ ထင်သည် ရွှေခရုလေးမှ အရည်တွေက ရွှေခရုလေးဝန်းကျင်တခုလုံးရွှဲ နစ်နေပြီး မျိုးကျော်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းနဲ့ လျာတွေတောင် ပေကျံလာသည်။ မျိုးကျော်မှာစုပ်နမ်းနေရင်း သူ့နှုတ်ခမ်းနဲ့ လျာမှာပေကျံလာတဲ့ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ အရှည်တွေကို မျိုချရမှာတော့ စိတ်ထဲရွံတာလိုလို ခံစားရလာလို့ တံတွေးတွေနဲ့အတူ မျိုမချချင်တာနဲ့ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ပေါင်ကို နမ်းတဲ့ပုံစံဖြင့် တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ပေါင်သားလေးတွေနဲ့ မိမိရဲ့ နှုတ်ခမ်းနဲ့ လျာမှာ ပေကျံနေတဲ့ သူ့ရဲ့အရည်တွေ သုတ်လိုက်တော့သည်။
ပြီးတော့မှ မျိုးကျော် သူ့ဘောင်းဘီလေးကို ချွတ်လိုက်တော့ တင်မိုးနိုင် သေချာကြည့်နေသည်။ တင်မိုးနိုင်စိတ်ထဲ မျိုးကျော်ရဲ့ ဒုတ်ကို သူမူးနေတုန်း သေချာပယ်ပယ် စုပ်ခဲ့ဖူးပေမဲ့ ခုလို အချိန်မှတော့ အရင်ကလုပ်ခဲ့တာ ဟုတ်မှဟုတ်ပါ့မလား။ ဒီဒုတ်ချောင်းကြီး တချောင်းလုံးသူ့ ရွှေခရုလေးထဲ ထိုးထည့်မည့် အရေးကြီး သေချာတွေးကြည့်ရင် ရင်ထိတ်စရာရယ်ပါ။ မျိုးကျော် ဘောင်းဘီလေးကို ချွတ်ပြီး ဒုတ်ကြီးက ထောင်ပြီး တရမ်းရမ်း လုပ်နေရင်းမှ.. မျိုးကျော်က တင်မိုးနိုင်ရဲ့ လက်ကိုကိုင်ပြီး သူ့ဒုတ်နေရာကို ညွန်းရင်း ပြုံးလျက်....
“ ကိုင်ကြည့်ပါလားဟင်.... ..”
“ ဟာ... ..ဟင့်အင်း..... နင်နော်... နင်...”
တင်မိုးနိုင် သူ့ဒုတ်ကို ကိုင်ကြည့်ချင်တယ် စုပ်ချင်တယ် ဆိုပေမဲ့ .. ဒီလိုမျိုး မျိုးကျော်အရှေ့မှာတော့ မကိုင်ရဲပါ။ တွေးနေတုန်း. မျိုးကျော်က တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ပေါင်နှစ်ဖက်ကိုဆွဲမကာ ကြားထဲနေရာ ၀င်ယူပြီး တင်မိုးနိုင်ရဲ့နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို တချက်နမ်းလိုက်ပြီး ....
“ နင် အဆင်သင့် ဖြစ်ပြီ မဟုတ်လား.. .”
တင်မိုးနိုင် ဘာပြောရမှန်းမသိ... မျိုးကျော်ကို ငိုမဲ့မဲ့ပုံလေးနဲ့ သာကြည့်နေရတော့သည်။ ပြီးတော့မှ....
“ နေပါအုန်းဟယ်.... ခဏလေးစောင့်ပါဟာ ... ငါကြောက်နေလို့ပါ ”
“ နင်ကလဲဟာ ... နင်ထင်နေသလောက် မနာပါဘူး ... မနာအောင် ထိန်းလုပ်ပါ့မယ် ”
မျိုးကျော် သူ့ရဲ့ဒုတ်ကို ဂွင်းထုသလို သုံးလေးချက်လောက် ထုပြီး တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ရွှေခရုနှုတ်ခမ်းဝနား အသာတေ့လိုက်တော့ တင်မိုးနိုင်မျက်နှာမှာ ကြောက်ရိပ်လေးသန်းပြီး အသက်ရှုတွေ မမှန်ချင်တော့ပေ ... တုန်တုန်ယင်ယင်လေး ဖြစ်လာသလို သူ့တကိုယ့်လုံးကိုလည်း တောင့်တင်းထားခါ သူ့ရဲ့ခြေထောက်တွေကို ဆန့်ထုတ်လာလို့ မျိုးကျော်ကတော့ သူရဲ့ဒုတ် တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ရွှေခရုလေးအ၀မှာ တေ့ထားပေမယ့် မသွင်းသေးပဲ ရွှေခရုရဲ့ လိုင်းလေးအတိုင်း အထက်အောက် ညင်သာစွာ ပွတ်ဆွဲပေးလိုက်ပြီး အပေါ်က အစိလေးကို ဒုတ်ထိပ်လေးနဲ့ မသိမသာလေး ဖိပေးလိုက်တော့ တင်မိုးနိုင် တွန့်ကနဲ ဖြစ်လို့သွားတယ်။ ပြီးတော့မှ အရည်လေးတွေနဲ့ စိုစိစိဖြစ်နေတဲ့ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ရွှေခရုလေးရဲ့ ၀င်ပေါက်လေးကို တေ့ကာ အနည်းငယ်အားစိုက်ပြီး ဖိထည့်လိုက်တော့ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ မသိစိတ်တွေက နာကျင်မှုကြောင့် ထင်တယ် ... မျိုးကျော်ရင်ဘတ်ကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့တွန်းကန်လာတယ်။
“ အားးးး အားးးး အ..... မျိုးကျော်... မျိုးကျော်... ခဏလေး.... .. နာတယ်... အားးး.... ခဏလေး.... ”
“ ပြီးပြီ ပြီးသွားပြီ...”
“ မဟုတ်ဘူး.... မျိုးကျော်....ငါအရမ်းနာနေလို့ဟာ ”
မျိုးကျော် ပါးစပ်က ပြီးပြီလို့သာ တင်မိုးနိုင် စိတ်သက်သာရာ ရအောင် ပြောနေပေမဲ့ တကယ်တမ်း သူ့ဒုတ်က -စ်ကလေး ၀င်ရုံသာရှိသေးတယ်။ ခက်တာက တင်မိုးနိုင်ကနာမှာ ကြောက်ကြောက်နဲ့ ခြေထောက်ကို အတင်းဆန့်ထုတ်နေတော့ သူခြေထောက်တွေက မထောင်ဖို့က ခက်နေပြီ။ မထူးဘူး ဒီတခါတော့ မညှာပဲအပြီးလုပ်မှဖြစ်မယ်ဟု တွေးရင်း ဆန့်ထားတဲ့ သူ့ရဲ့ ခြေထောက်တွေကို မပြီးတော့ ကားနိုင်သမျှကားအောင် အားလေးနဲ့ ဆွဲဖြဲရင်း သူ့ကိုယ်နဲ့ အပြည့်ယူထားလိုက်သည်။ နောက်ထပ်တကြိမ်မျိုးကျော် အားပါပါလေးနဲ့ ထိုးသွင်းလိုက်တော့ တင်မိုးနိုင် မျက်လုံးပြူးလာသလို မျက်နှာပေါ်မှာ နာကျင်မှုဒဏ်ကို စတင်ခံစားလိုက်ရလို့ထင်တယ် ခေါင်းလေးကို မျိုးကျော်ရင်ဘတ် အတွင်းလျိုဝင်ခါ ကုန်းရုန်းထဖို့ တွန်းကန်ထားပြန်တယ်။ ဒီတခါမှာတော့ ဒုတ်ရဲ့ တ၀တ်လောက် ၀င်သွားတာကြောင့် တင်မိုးနိုင် နာကျင်မှု ခံစားနေရာမှာပဲလေ။
“ အားးးးး.. အားး ... နာတယ် ... မျိုးကျော်.... ဖြည်းဖြည်း လုပ်ပါဟယ် ... အရမ်းနာနေလို့ပါ.”
“ တကယ်အကုန်ဝင်သွားပြီ တင်မိုးနိုင်ရယ်... နောက်ထပ် မနာတော့ဘူး လေ .... ခဏလေး တောင့်ခံထားဟာ”
“ မျိုးကျော် ... ငါအရမ်းကို နာနေလို့ပါဟာ ...နင့်ဟာလေးကို ပြန်ထုတ်လိုက်ပါဦး ”
“ အင်း .... နည်းနည်း ပြန်ထုတ်လိုက်မယ်နော်....”
တင်မိုးနိုင် နာကျင်မှုကြောင့်လား .... အပျိုရည်ပျက်လို့ ၀မ်းနည်းသွားတာလား မပြောတတ် .... မျက်ရည်လေးတွေ ၀ဲလို့လာနေတယ်။ မျိုးကျော်က ရင်ထဲကတော့ မကောင်းပေမယ့် ... ဒီလိုအခြေနေမှာ...နောက်ဆုတ်လိုက်လို့ မဖြစ်တဲ့အတွက် ... အသာလေး နည်းနည်းပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး ... အာရုံပြောင်းသွားစေရန် တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ဘယ်ဖက် နို့သီးခေါင်းလေးကို စို့လိုက်ပြီး သူ့မျက်နှာလေးကို မသိမသာခိုးကြည့်လိုက်တော့ တင်မိုးနိုင်က အသနားခံတဲ့မျက်လုံးလား တောင့်ပြီးကြိတ်မှိတ်ခံနေရတဲ့ မျက်လုံးလား ဝေခွဲမရတဲ့ အကြည့်နဲ့သူ့ကိုငေးနေတာ သတိထားမိလိုက်တယ်။
“ အရမ်းနာနေလားဟင် .... ဒီခဏတာလေး သည်းခံလိုက် .... ဒီတကြိမ်လေးပဲ နာမှာပါကွာ ” ...လို့ နှစ်သိမ့်စကားဆိုလိုက်တယ်။
“ အင်း ... နာတာတော့ နာပါတယ် ... နင်က ငါ့အပေါ် ကြင်ကြင်နာနာဆက်ဆံပေးရင် ငါ့အပျိုဘ၀ ပေးလိုက်ရတာ ၀မ်းမနည်းတော့ပါဘူး ”
“ အင်း ... စိတ်ချပါ ... ငါ နင့်အပေါ်မှာ တစ်သက်လုံး သစ္စာရှိပါမယ်လို့ ကတိပေးပါတယ်ဟာ ” ...လို့ မျိုးကျော်ပြန်ပြောလိုက်တော့ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ မျက်ရည်ဝဲနေတဲ့ မျက်လုံးလေးကနေအပြုံးရိပ်လေး ဖြတ်သန်းသွားပြီး ... ခေါင်းလေးကို မသိမသာငြိမ့်ကာ မျိုးကျော်ရဲ့ လည်ပင်းလေးကို သိုင်းဖက်လာတော့တယ်။
တင်မိုးနိုင် သိုင်းဖက်လာတော့ ... အဆင်ပြေချောမွေ့တော့မယ်ဆိုတာ မျိုးကျော်သိလိုက်ရပြီလေ။ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို အသာအယာ နမ်းလိုက်ပြီး နဖူးခြင်းထိကာ ... “ အဲတာဆိုရင် ... နာတာလေးကို ခဏလေး တောင့်ခံလိုက်နော် ” လို့ တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်တယ်။ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ မျက်နှာမှာ တကယ့်ကို စွန့်စားမှု တရပ်ကို ဆောင်ရွက်တော့မယ့် ပုံစံမျိုး မျက်ဝန်းမှာလည်း အပြုံးရိပ်သန်းသလိုဖြစ်ပြီး ခေါင်းလေးကို ငြိမ့်လာတယ်။ မျိုးကျော်လည်း ခုနက တိုးလို့တန်းလန်း ၀င်နေတဲ့ ဒုတ်လေးကို ခါးအားအနည်းငယ်ထပ်ပြီးစိုက်လိုက်တော့ ... အပျိုအမှေးပါးလို့ ထင်ရတဲ့ တင်းခံနေတဲ့ အရာတခုကသူ့ရဲ့ ဒုတ်ထိပ်ကို တွန်းခံထားသလို ခံစားလိုက်ရတာကြောင့် ဆုတ်လိုက် တိုးလိုက် လုပ်နေရင်းကနေ အားစိုက်ကာဖိထည့်လိုက်တော့တယ်။
“ အားးး ... မျိုးကျော်ရယ် ... အသဲခိုက်သွားတာပဲ ” .... “ နာလိုက်တာဟာ ....”
ဆိုပြီး တင်မိုးနိုင်ရဲ့ သိုင်းဖက်ထားတဲ့ လက်တွေက ပိုမိုတင်းကြပ်လာတာကြောင့် ခဏလေးရပ်ရင်း သူ့ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို ယုယစွာ စုပ်နမ်းကာ ...
“ အပျိုမှေး ပေါက်သွားပြီ ” လို့ ပြုံးရင်းပြောလိုက်တယ်။
တင်မိုးနိုင်ရဲ့ မျက်ဝန်းတွေမှာတော့ နာကျင်မှု၊ အံ့သြ၀မ်းနည်းမှုတွေလို့ထင်ရတဲ့ မျက်ရည်စတွေ ပြည့်လာတယ်။ ပြီးတော့ ...
“ မျိုးကျော်ရယ် ... နင့်ကို ငါ အရမ်းချစ်ခဲ့ရတာ ကြာပြီ ... နင် ကသာ သတိမထားမိတာပါ ” လို့ ပြောလာတယ်။
“ အေးပါဟာ ... ငါ့အပြစ်ပါ ...ငါအခုတော့ ကောင်းကောင်းသိပြီလေ ”
လို့ပြောရင်း ညာဖက်ပါးလေးကို အနမ်းတချက်ပေးလိုက်ပြီး ခါးကို မသိမသာလေး ရှေးတိုးနောက်ဆုတ် စတင်လှုပ်ရှာလိုက်တော့တယ်။ တင်မိုးနိုင်ကဖက်ထားတဲ့လက်တွေကိုအနည်းငယ် ဖြေလျော့ပေးလာတာကြောင့် သူ့လက်နှစ်ဖက်ကို တင်မိုးနိုင်ရဲ့ လက်နှစ်ဖက်အောက် လျှိုပြီးပါးလေးတွေကို ညင်သာစွာ ပွတ်ပေးကာ မသိမသာလေး စတင်လှုပ်ရှားလိုက်ပြီး ....
“ နာနေသေးလား ”
“ တအားကြီး မနာတော့ဘူး ... ဒါပေမယ့် အထဲမှာ စပ်ဖျင်းဖျင်းလေး ဖြစ်နေတယ် ”
“ အင်း ... အပျိုမှေး ပေါက်သွားခါစ ဆိုတော့ စပ်နေမှာပေါ့ ”
မျိုးကျော်လည်း ဖြေးညှင်းစွာ လှုပ်ရာကနေ အရှိန်လေးကို တင်လိုက်တော့ တင်မိုးနိုင်လည်း ပထမဆုံးအကြိမ် ခံစားရတဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှု အရသာကို နည်းနည်းသဘောပေါက်စပြုလာပုံရတယ်။ ပါးစပ်မှလည်း ညဉ်းညူသံလေး အနည်းငယ် ထွက်လာပြီး ဖက်ထားတဲ့ လက်တွေက မျိုးကျော်ရဲ့ ကျောပြင်ကို ကုတ်ချစ်သလိုမျိုးဖြစ်လာတာကြောင့် မျိုးကျော်သိလိုက်ပြီလေ ... တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ခံစားမှုတွေ အမြင့်ဆုံးနေရာကို ရောက်ရှိလာပြီဆိုတာကိုပါ။
“ မျိုးကျော် ... ငါ့ရင်ထဲ တမျိုးကြီးဟာ ... ဆို့နစ်နေသလိုပဲ ”
“ အင်း ... နင်ပြီးချင်သလိုလိုဖြစ်လာတာ ”
“ မသိဘူး ... တကိုယ်လုံး မွှေးညှင်းတွေ ထောင်လာသလို ရှိန်းတိန်းဖိန်းတိန်း ဖြစ်လာပြီး ရင်ထဲမှာ ဆို့တက်လာတာတော့ သိတယ်ဟာ ”
“ အင်း ... ဒါဆို နင်ဖက်ထားတဲ့ လက်တွေကို နည်းနည်းလေးလျော့လိုက် ... ငါနည်းနည်းမြန်မြန် လုပ်ပေးမယ်လေ ”
လို့ မျိုးကျော်ပြောလိုက်တော့ ... တင်မိုးနိုင်ရဲ့ လက်တွေ လျော့လာပေးတာနဲ့ ဆောင့်ချက်တွေကို ပိုမြန်လိုက်တယ်။ တင်မိုးနိုင် ဖက်ထားတဲ့လက်တွေက တင်းလိုက်လျော့လိုက်ကြားထဲကနေ မျိုးကျော်ရဲ့ ဆောင့်ချက်တွေက အရှိန်လေး တက်လာတာကြောင့် ...တင်မိုးနိုင်မှာ မျက်မှောင်လေးကြုံ့ကာ ...
“ အားးး ....ဟာ ... ငါဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ မသိဘူး ...ရှုးပေါက်ချင်သလိုလို ... မျိုးပဲ ...ဟူးးးး ”
“ နင် စိတ်ကိုလျော့ထား ... လျော့ထားလိုက် ... ဘာမှမတွေးနဲ့ ”
လို့မျိုးကျော်ပြောနေရင်းကနေ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ဖက်ထားတဲ့ လက်တွေက ပိုမိုတင်းကြပ်လာသလို သူ့ရဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်က မျိုးကျော်ရဲ့ ခါးနေရာကိုခွဖက်လာပြီး မျိုးကျော်ကို မလှုပ်နိုင်အောင် ဆွဲချုပ်လာတာကြောင့် ဆောင့်လို့မရတော့ ...ခဏလေးမှေးကာ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းကို အနမ်းချွေမယ်လို့ အလုပ်မှာ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းအစုံက မျိုးကျော်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းကို အင်အားပါပါလေး စုပ်နမ်းလာတော့တယ်။ မျိုးကျော်မှာ ခါးကလည်း အချုပ်ခံထားရပြီး မိမိရဲ့ တံတောင် နှစ်ဖက်က အိပ်ယာပေါ်ထောက်ကာတင်မိုးနိုင်ရဲ့ အပေါ်မှောက်ခုံအနေအထားဖြင့် ယုယစွာ ပြန်နမ်းလိုက်တော့တယ်။ ၂ယောက်သား နမ်းနေရာကနေ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ခြေတွေလက်တွေ အင်အားလျော့လာတာကြောင့် ...
“ ဘယ်လိုလဲ ... မိုး ... နာနေသေးလား ”
လို့ ပြုံးစစနဲ့မေးလိုက်တော့ ... တင်မိုးနိုင်က ...သူ့ရဲ့ ရင်ဘတ်လေးကို လက်သီးဖြင့် ညင်သာစွာထုကာ ... မျက်လုံးလွဲလိုက်ပြီး
“ သွား ... လူဆိုး ... သူများ အပျိုဘ၀ကို ညာယူပြီး ... လူကို မိုး တဲ့ ...အဖျားဆွတ် ခေါ်နေသေးတယ် ”
ဆိုပြီး ချစ်စဖွယ် အပြုံးလေးဖြင့် ပြန်ပြောလိုက်တော့တယ်။
မဆီမဆိုင် မျိုးကျော်ရဲ့ လက်ဦးဆရာကောင်းဖြစ်တဲ့ ဇင့်ကို သတိရသွားပြီး မျိုးကျော်ရဲ့ မျက်နှာမှာ အနည်းငယ် ငြိုးသွားတာကို သတိထားမိလိုက်တဲ့ တင်မိုးနိုင်က မျိုးကျော်ကို “ ကို ဘာဖြစ်သွားတာလဲ ” လို့ မေးလာတဲ့အတွက် ဟန်ကိုယ့်ဖို့ ဆိုတဲ့အတိုင်း မျိုးကျော်က ချက်ချင်းပင် ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။
“ ဒီလောက်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ မိုး ကို ကိုယ်ဘာလို့ ပါးရိုက်မိတာလဲ တွေးပြီးစိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားတာပါကွာ ”
“ ကိုရယ် ” ဆိုပြီး တင်မိုးနိုင်ဆီကနေ မျိုးကျော်ရဲ့ ဘယ်ဖက်ပါးကို အနမ်းတပွင့် ပေးလာတယ်။ မျိုးကျော်က ...
“ မိုး အမောပြေရင် ပြန်စမယ်လေ ” လို့ ဆိုလိုက်တော့ ... တင်မိုးနိုင်ရဲ့ မျက်နှာမှာ အံ့သြမှုနဲ့အတူ ...
“ လုပ်ဦးမလို့လား ... နှာဘူးလေး ”
“ မိုး ကလည်းကွာ ... ကိုမှ မပြီးသေးတာ ” မျက်နှာလေး စူချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ပြန်ဖြေလိုက်တော့
“ ဟုတ်ပါပြီ ရှင်ရယ် ... ဒါမျိုးဆိုရင် ဥာဏ်တော်တော်ကောင်း တယ်ပေါ့ ”
“ အင်း ... မိုးရဲ့ အပျိုစင်နောက်ဆုံးအချိန်အတွက် တာဝန်ယူလိုက်ရတဲ့ ကိုယ့်ကိုလည်း သနားပါဦးကွာ ”
နှစ်ယောက်သား တယောက်မျက်နှာ တယောက်ကြည့်ပြီး မတိုင်ပင်ပဲ ရယ်မိကြတယ်။
“ ရေလေးတော့ ဆေးပါရစေဦး ... စပ်ဖျင်းဖျင်းစေးကပ်ကပ် ဖြစ်နေသလိုပဲ ”
“ ကိုယ်ဆေးပေးမယ် ... ပြောင်နေအောင် ဆေးပေးမယ် ”
“ နေပါ ... ရှက်စရာကြီး ... ညာပြီးတော့ သူများဟာလေးကို ကြည့်ဖို့ဟုတ်လား ”
“ ဟီးးးး ..... ဟီးးးး ”
“ ထတော့ကွာ ... လေးနေပြီး သူ့ကိုယ်လုံးကြီးနဲ့ တက်ပြီးဖိထားတာ ... ဖယ်ပါဦးရှင် ”
“ ကန်တော့ဆွမ်းပါဗျာ ”
မျိုးကျော်က ပြောလိုက်တော့ နှစ်ယောက်သား ထပ်ရယ်မိတယ်။ မျိုးကျော်က ရွှေခရုထဲက ဒုတ်ကို အသာလေး ဆွဲထုတ်လိုက်တော့ ဖလွတ် ဆိုပြီး လေခိုသံလေးကြားလိုက်ရတယ်။ မျိုးကျော်ရဲ့ ထောင်နေသေးတဲ့ ဒုတ်ကို တင်မိုးနိုင်က ကြည့်ပြီး လက်ဝါးလေး နှစ်ဖက် ပါးစပ်မှာ အုပ်ကာ “ သွေးတွေ ... သွေးတွေ ပေနေတယ် ” လို့ အလန့်တကြားပြောလာတော့ မျိုးကျော်လည်း အောက်ကိုငုံ့ကာ သွေးတွေခြောက်ကပ်စပြုနေတဲ့ သူ့ဒုတ်ကို ကြည့်မိတော့တယ်။
“ အင်း ... သူရဲကောင်းမှာလည်း ဒဏ်ရာတွေနဲ့ပါကွာ ... ဟိဟိဟိ ”
“ မိုးရဲ့ ကိုယ်က သွေးတွေလား ... ရာသီလာမယ့်ရက်တော့ မဟုတ်သေးပဲနဲ့ ”
“ မဟုတ်ဘူးလေ ...မိုးရယ် ...အပျိုမှေးပါး ပေါက်ပြဲလို့ ၀မ်းနည်းပြီး ငိုလိုက်တဲ့ မျက်ရည်တွေ ဖြစ်မှာပေါ့ ”
“ အင်း ... ဒါကြောင့် စပ်နေတာကိုး ... လူဆိုး ... သူရဲကောင်းလုပ်နေတယ် ... သူများကို အနိုင်ယူရတာ တော်တော်ပျော်နေတာပေါ့ ”
လို့ ဆိုလိုက်တော့ ... မျိုးကျော်က လက်ကလေးကမ်းပေးလိုက်တာကြောင့် တင်မိုးနိုင် ပက်လက်လှန် အနေအထားကနေ ကမ်းပေးလာတဲ့ လက်ကို အားပြုကာထလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ နှစ်ယောက်သား ကုတင်ပေါ်ကဆင်းပြီး ရေချိုးခန်းဖက်ကို လက်တွဲကာသွားလိုက်ကြတယ်။ ရေချိုးခန်းဝရောက်တော့ ...
“ ကို .. မိုးရှက်လို့ပါ .. ကိုယ်ဟာကိုယ်ပဲ ဆေးလိုက်တော့မယ်နော် ”
“ မိုးရယ် ... ဘာရှက်စရာရှိလို့လဲ ... တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ ရှက်စရာဆိုတာ မလိုတော့ဘူးလေ ”
ပြောရင်းနဲ့ ဆွဲပွေ့လိုက်ပြီး ... ရေချိုးခန်းထဲကို ခေါ်သွားလိုက်တယ်။ ရေချိုးခန်းထဲရောက်တော့ တင်မိုးနိုင်ကို အသာအယာချပြီး shower ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့
“ မိုး ဟို ဘက်တက်ဘောင်ပေါ်ကို ညာခြေထောက်တဖက် တင်ထားလိုက် ”
ပေါင်ခြံတ၀ိုက်ပေနေတဲ့ ပြောင်လဲ့လဲ့ ခြောက်နေတဲ့ အရည်တချို့နဲ့ သွေးစသွေးန တချို့ကိုတွေ့ရတယ်။ မျိုးကျော်ရင်ထဲ အပျော်တချို့ စီးဆင်းသွားတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုဘ၀မှာ အမှတ်တရ အပျိုစင်နဲ့ ဆက်ဆံဖူးခြင်း ဖြစ်တာကြောင့်ပဲလေ။ တင်မိုးနိုင်အတွက် အမှတ်တရဖြစ်သလို ကိုယ့်အတွက်လည်း အမှတ်တရဖြစ်တာပါဘဲ။ ရေပန်းကိုကိုင်ပြီး တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ပေါင်ခြံတ၀ိုက်ကို ပန်းပေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဘယ်လက်နဲ့ လိုက်ပွတ်ပေးနေရာ ရွှေခရုရဲ့ နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို ထိမိသွားတာကြောင့် တင်မိုးနိုင်မျက်နှာမှာ ခံစားမှုအရိပ်ယောင်လေးတွေ ပြေးသွာသလိုမျိုးတွေ့လိုက်ရတယ်။ တင်မိုးနိုင်က သူ့ရဲ့ ရွှေခရုလေးကို ငုံ့ကြည့်ပြီး ဘယ်လက်မှ အ၀ကို အနည်းငယ်ဟကာ အတွင်းပိုင်းကို စိတ်ပူနေပုံပဲ။ ပြီးတော့ မျိုးကျော်ရဲ့ ဒုတ်ဖက်ကို မျက်စိက ရောက်လာတယ်။
“ ကို့ဟာကြီးက မကျသေးပါလား ... ဒီအတိုင်းကြီး မတ်နေတော့ မညောင်းဘူးလားဟင် ”
“ ပြီးရင် အညောင်းပြေအောင်လုပ်ပေးလေ ”
တင်မိုးနိုင်ရဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာ ဆုံးဖြတ်ချက် တခုခုကို ပိုင်နိုင်စွာ ချလိုက်နိုင်သလိုမျိုး အရိပ်ယောင် ဖြတ်သန်းသွားတာ မျိုးကျော် သတိထားမိလိုက်တော့တယ်။ တင်မိုးနိုင်က မျိုးကျော် ရေပန်းကိုင်ထားတဲ့ညာလက်ကို သူ့ရဲ့ညာဘက်လက်ကလေး လှမ်းပေးလိုက်တာကြောင့် မျိုးကျော်လည်းယောင်ယမ်းပြီးပေးလိုက်မိတယ်။ တင်မိုးနိုင်က ဘတ်တက်မှာတင်ထားတဲ့ သူ့ညာခြေထောက်ချကာ မျိုးကျော်နားကိုတိုးကပ်လာပြီး ညာလက်မှာကိုင်ထားတဲ့ ရေပန်းနဲ့ မျိုးကျော်ရဲ့ ဒုတ်ကိုချိန်ရွယ်ပြီးတော့ ပန်းပင်ရေဖြန်းသလိုမျိုးရေပန်းကို တချက်ဝှေ့ယမ်းလိုက်တယ်။ မျိုးကျော်လည်း သူဘာလုပ်မယ်မသိတာကြောင့် အလိုက်ထိုက်လေးပဲ စောင့်ကြည့်နေတယ်။
ဘယ်လက်ကနေ ထောင်မတ်နေတဲ့ မျိုးကျော်ညီလေးကိုအသာအယာဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး လက်မတချောင်းထဲက ဟိုပွတ်ဒီပွတ်ခဏတာလုပ်လိုက်တယ်။ အံသြတာကတကြောင်း ဘာလုပ်လာမယ်မသိစောင့်ကြည့်ချင်တာက တကြောင်းကြောင့် မျိုးကျော်ရင်တဒိတ်ဒိတ်ခုံလာသလိုဖြစ်လာတော့တယ်။ ညီလေးကို တချက်ငုံ့ကြည့် ပြီးရေပန်းနဲ့သေချာပြောင်စင်အောင် ထိုးဆေးနေပုံပါဘဲ။ ရေချိုးခန်းထဲရေကျသံမှလွဲလို့တခြားအသံတိတ်ဆိတ်နေတယ်။ တင်မိုးနိုင်က ဘေဇင်ရှေ့မှာထားတဲ့ Body Soap ကိုတချက်ညှစ်ယူလိုက်ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ဘယ်ဖက်လက်မှာအမြုပ်ထွက်အောင်ပွတ်လိုက်ကာ မျိုးကျော်ရဲ့ ညီလေးကို ပွတ်တိုက်ဆေးကြောလိုက်တယ်။
အောက်ကအမွှာညီနောင်အထိ သေချာစွာပွတ်တိုက်ဆေးကြောပြီးတော့ ရေပန်းကိုထပ်ဖြန်းလိုက်ပြီးဆပ်ပြာပူပေါင်းလေးတွေ ကျသွားကုန်စင်အောင်အထိ ရေဆေးနေပြန်တော့တယ်။ မျိုးကျော်လည်း မိန်းကလေးလက်ရဲ့ နူးညံ့စွာကိုင်တွယ်ခြင်းကို ခံလိုက်ရတာကြောင့် ဒုတ်မှာအစွမ်းကုန်ထောင်မတ်လို့လာတယ်။ ဒုတ်ထောင်တဲ့ အချိန်ကြာမြင့်လာတာကြောင့် ဆီးသွားချင်သလိုလိုမျိုး ဖြစ်လာကာ အမွှာညီနောင်မှာလည်း အောင့်သလိုလိုဖြစ်လာတော့တယ်။
တင်မိုးနိုင်ကရေပန်းကိုပိတ်လိုက်ပြီး ရေပိုက်ကိုနံရံမှာပြန်ချိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ၀တ်လစ်စလစ်ဖြစ်နေတဲ့ တင်မိုးနိုင်ရဲ့နောက်ပိုင်းအလှကို မျိုးကျော်သတိစထားမိတော့တယ်။ အရပ်မနိမ့်မမြင့်ဆိုပေမယ့် ခါးသိမ်တာကတကြောင်း အပျိုစင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့်တကြောင်းလို့ထင်ပါတယ် ... တင်ပါးလေးကတင်းပြီးလုံးဝန်းလို့နေတယ်။ အင်း ... ငါတော့ ကံကောင်းတယ်ထင်တာပဲလို့ စိတ်ထဲတချက်တွေးမိတယ်။ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ မျက်နှာမှာခပ်တည်တည်ဖြစ်နေပြီ မျိုးကျော်ရဲ့ရှေ့မှာဒူးထောက်ချလိုက်တော့ မျိုးကျော်ခမျာ ထိတ်လန့်စွာနဲ့ကြည့်လိုက်မိတယ်။ ညာလက်က ညီလေးကိုဖမ်းကိုင်လိုက်ပြီး အနီးကပ်စူးစမ်းသလိုမျိုးမျက်လုံးတွေနဲ့ စိုက်ကြည့်နေတယ်။ ညီလေးရဲ့ထိပ်ဖူးမှာလည်း တင်းပြီး ပြောင်လက်နေပြီး အကြောတွေကလည်းထိုးထိုးထောင်ထောင်မြင်နေရတယ်။ တင်မိုးနိုင်က တချက်မော့ကြည့်ကာ လျှာလေးထုတ်ပြီး လျှာဖျားလေးနဲ့ ညီလေးရဲ့ထိပ်က အပေါက်လေးကို တချက်ထိုးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ... ဘယ်လိုနေလဲဆိုတဲ့အသွင်ဆောင်တဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့မော့ကြည့်လာတော့ မျိုးကျော်ရဲ့ ပြုံးစစနဲ့ခေါင်းမသိမသာလေး ငြိမ့်ပြလိုက်တာကြောင့် ပြန်ငုံ့ကာ လျှာအပြားလေးနဲ့ထိပ်ဖူးကိုမရဲတရဲပုံစံနဲ့လျှက်လိုက်တယ်။ နှုတ်ခမ်းလေးစူပြီးညီလေးရဲ့ထိပ်ဖူးကို နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့တချက်စွပ်သလိုလုပ်လိုက် ပြီးတော့ မျိုးကျော်ကိုမော့ကြည့်ကာ ....
“ မိုး မလုပ်ချင်ဘူး ... ကို က မိုးကို အစွမ်းကုန်ချစ်ပြခဲ့တော့ မရွံမရှာလုပ်ပေးခဲ့တော့ မိုးအနေနဲ့ တာဝန်မကျေမှာစိုးလို့ပါ ”
တိုးညှင်းစွာပြောလာတယ်။ ဒီလိုစကားကြားရတော့ အပျိုတယောက်က ပထမဦးဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုမှာ အစွမ်းကုန်အရဲစွန့်ပြီး စေတနာနဲ့ကြိုးစားလုပ်ဆောင်တော့မယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတာကြောင့် မျိုးကျော်အရမ်းပျော်လာသလိုရှိတယ်။ ခေါင်းလေးပဲငြိမ့်ပြလိုက်တော့တယ်။
တင်မိုးနိုင်က ညီလေးကိုညာလက်ကကိုင်ပြီး ရေခဲချောင်းစုပ်သလိုမျိုးသုံးလေးချက် ဆက်တိုက်စုပ်လိုက်တယ်။ ခဏပြန်ရပ်ပြီး ...
“ ကို ... မိုးလုပ်ပေးတာ ကောင်းရဲ့လား ... ကြိုက်ရောကြိုက်ရဲ့လား ”
“ မိုးရယ် ဘယ်လိုမေးလိုက်တာလဲ ... အကြောပေါင်းတသောင်း ပွင့်ချင်သလိုလို ဖြစ်လာလို့ ပြီးချင်သလိုလိုတောင်ဖြစ်လာတယ် ”
တင်မိုးနိုင်ချက်ချင်းဆိုသလို မျိုးကျော်ရဲ့ ဒုတ်ကိုဖွဖွလေးဆုပ်ကိုင်ကာဂွင်းတိုက်သလိုမျိုး နှစ်ချက်လောက်လုပ်ပြီး နှုတ်ခမ်းတေ့ကာ စတင်စုပ်ပေးလိုက်တော့တယ်။ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ စိတ်အစဉ်မှာလဲ ချစ်သူထံမှ ကောင်းတယ်လို့အဖြေလေးကြောင့် ချစ်စိတ် ရမက်အစုံကြွတက်လို့လာတော့တယ်။ တင်မိုးနိုင်က မျိုးကျော်မူးတုန်းကထိတွေ့ဖူးခဲ့တာကို မျိုးကျော် ခမျာမသိရှာပေမယ့် ချစ်သူမှပြုစုယုယတာခံရခြင်းကြောင့် စိတ်အရှိန်မှာအေးကနဲ အေးကနည်းဖြစ်လာပြီးတော့ ပြီးချင်သလိုလိုဖြစ်လာတာကြောင့် ....
“ မိုးရေ ...ထုတ်လိုက်တော့ ကိုပြီးချင်သလိုလိုဖြစ်လာပြီ ” ပြောလည်းပြောခေါင်းကိုလည်းတွန်းနေမိတယ်။ ဘာကြောင့်လဲမသိ ...တင်မိုးနိုင်က မျိုးကျော်ရဲ့ဒုတ်ကို လုံးဝမလွှတ်ပဲ
ဆက်စုပ်ပေးနေတော့ “ မိုးးးး ....မိုးးးး ....ရယ် ...ပြီးတော့မယ် ...ပြီးတော့မယ် ” လို့တွန်းထားတဲ့လက်ကို ဆွဲတဲ့ဖက်ကပြောင်းလိုက်တော့တယ်။ သူ့ခေါင်းလေးက ကိုင်ပြီးတော့
ညင်သာစွာခါးအရှိန်လေးကိုပါထည့်ကာ ဆောင့်သလိုမျိုးလုပ်နေမိတယ်။ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ စုပ်အားကြောင့် နောက်သုံးလေးချက်မှာတင် ... “ အားးး ....ဟားးး ...အားးး ” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့
ပါးစပ်ထဲကို အရှိန်ဟုန်ပြင်းစွာ ပန်းထည့်လိုက်တော့တယ်။ တင်မိုးနိုင်က ဒုတ်ကိုပါးစပ်မှမချွတ်ပဲ မျိုးကျော်အားမျက်လုံးလှန်မော့ကြည့်နေတာကြောင့် မျိုးကျော်လည်း တချက်ထိတ်
သွားကာ ... “ ကိုယ်ပါးစပ်ထဲပန်းထည့်လိုက်တာ ...ဆောရီးပါမိုးရယ် ” ဆိုကာ ခေါင်းကိုင်ထားတဲ့လက်လေးကို ဖြေလျော့ဖို့သတိရပြီး သူလက်လေးတွေကိုဆွဲကာ မထူလိုက်တာ
ကြောင့် တင်မိုးနိုင်မှာ နွမ်းလျလျအပြုံးလေးကြားထဲကနေပြီး ခေါင်းလေးမသိမသာခါလိုက်တယ်။
“ မိုး ... ကိုယ့်ဟာတွေရော ...ဟင် ...မြိုချလိုက်တာလား ”
“ အင်း ... ”
“ ဘာလို့မြိုချလိုက်ရတာလဲ ... ဟင် ... ဟင် ”
တင်မိုးနိုင် ဘာမှမပြောပဲ ဘေဇင်နားကိုလျောက်သွားပြီး ရေပိုက်ဖွင့်ကာ ပလုပ်တချက်ကျင်းလိုက်တယ်။ မျိုးကျော်က နောက်ကနေတင်မိုးနိုင်ရဲ့ ရင်သားအောက်ပိုင်း ခါးနေရာလောက်ပွေ့ဖက်ကာ ဘေဇင်အရှေ့မှာ တပ်ထားတဲ့မှန်ထဲကနေကြည့်ပြီး ..... “ ဘာလို့မြိုချလိုက်ရတာလဲ ... မိုးရယ် ... ဟင် ” လို့ထပ်မေးမိပြန်တယ်။ တင်မိုးနိုင်က ခါးကိုမတ်ပြီး လည်ပင်း ညာဖက်လှည့်ကာ ဘယ်လက်မှလည်း မျိုးကျော်ရဲ့နောက်ကနေသိုင်းဖက်ထားတဲ့ ဘယ်လက်ချင်းထပ် သူ့ရဲ့ညာဖက်လက်ကလည်း မျိုးကျော်ရဲ့ခေါင်းလေးကို နောက်ပြန်ဆွဲပြီးတော့ တိုးတိုးလေးပြန်ပြောလိုက်တာက ...
“ ကို့ကိုအရမ်းချစ်မိသွားလို့ပေါ့ရှင်ရယ် ”
မျိုးကျော် ဖက်ထားရာကနေတင်မိုးနိုင်ရဲ့ ညာဖက်ပါးလေးကို နမ်းလိုက်ပြီးကြည်နူးနေမိတယ်။ ပြီးတော့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆွဲလှည့်လိုက်ကာ နှုတ်ခမ်းတွေကို စုပ်နမ်းလိုက်တော့ တင်မိုးနိုင်က အလိုက်သင့်လေးတုန့်ပြန်လာတယ်။ တင်မိုးနိုင်နဲ့ အနမ်းတွေစက်သေနတ်ပစ်နေရင်း ခါးလေးကိုကိုင်မကာပွေ့ချီလိုက်တော့ တင်မိုးနိုင် အလိုက်သင့်လေး မျိုးကျော်ရဲ့ ခါးကိုခွထားလိုက်တယ်။ မျိုးကျော်လည်း တင်မိုးနိုင်ကို ဒီအတိုင်းပွေ့ခေါ်ပြီးတော့ အိပ်ခန်းဖက်ကိုဦးတည်လိုက်တယ်။ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာလေးကို ပေါ့ပေါ့လေးသယ်လာနိုင်တာ အချစ်စွမ်းအင်တခုလို့ထင်မိတယ်။ တင်မိုးနိုင်က မျိုးကျော်လည်ပင်းကို သိုင်းဖက်ထားပြီး လွတ်သွားမှာစိုးလို့ ပုံစံနဲ့ သူ့ရဲ့ဘယ်ပါးနဲ့ မျိုးကျော်ရဲ့ ဘယ်ပါးကိုတထပ်ထဲကျနော်အောင် ကပ်ထားတော့သလို ရင်ဘတ်ချင်းလည်း အပ်နေတာကြောင့် ရင်ခုန်သံခြင်းနီးစပ်နေသလိုခံစားရတယ်။ ကုတင်စောင်းကို ရောက်တော့မျိုးကျော်ခါးလေးကို အနည်းငယ်ကုန်းပြီး ချစ်သူတင်မိုးနိုင်ရဲ့ တင်ပါးလေးနဲ့အနေတော်လေးဖြစ်အောင်ချပေးလိုက်တာကြောင့် တင်မိုးနိုင်လည်း ဖက်ထားတဲ့လက်တွေကိုဖြေလျော့ကာ ကုတင်ပေါ်ပက်လက်လှန်အနေထားလေးနဲ့ အိပ်ချလိုက်တော့ ရွှေရင်နှစ်မွှာလှုပ်ခါသွားတယ်။ မျိုးကျော်လည်း အခုမှပဲ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအလှအပကို သေချာသတိထားမိတော့တယ်။ ရင်သားတွေကတင်းရင်း ကျစ်လစ်ပြီးတော့ လူကြီးလက်ဝါးတအုပ်ဆိုရင် ပြည့်လျံနေမယ့်အရွယ်အစားဆိုတော့ B, C size တခုခုပဲဖြစ်မယ်။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကလည်း စူမထွက်သေးပဲ နို့သီးခေါင်းအလယ်လောက်က အတွင်းကိုချိုင့်ဝင်နေသေးပြီး ရင်သားတွေက၀င်းဝါလို့နေတယ်။ အသားရေလှတယ်လို့ဆိုရမယ် ... မှဲ့နဲ့တူတဲ့အရာတွေ အစက်အပျောက်တွေက မရှိတော့ရှေ့ပိုင်းအလှကပြောစရာမရှိလောက်အောင်ကိုပဲ ... မျိုးကျော်စိုက်ကြည့်နေတာကို သတိထားမိတဲ့ တင်မိုးနိုင်က ရှက်သလိုလိုဖြစ်လာတာကြောင့် မျိုးကျော်အား ....
“ ကိုရယ် ... ဘာလို့အဲလောက်တောင် စိုက်ကြည့်နေရတာလဲ ”
“ ဒီလောက်လှလိမ့်မယ် မထင်ထားလို့ ”
“ ဘယ်လောက်များလှနေလို့လဲ ”
“ ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင် ဆိုတာ ဒါကိုတင်စားတာထင်တယ် ”
“ သွား ... ကိုယ့်ငါးချဉ် ကိုယ်ချဉ်နေပြန်ပြီ ”
ချစ်စနိုးလေးဖြင့်ညုတုတုပြောလိုက်တာကြောင့် မျိုးကျော် စိတ်တွေပြန်ထကြွလို့လာနေပြီလေ။ မျိုးကျော်က ကုတင်စောင်းမှာ ဖင်လေးတင်ပြီး တန်းလန်းဖြစ်နေတဲ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ဆွဲမလိုက်ကာ ခြေဖနောင့်နှစ်ဖက်ကို အိပ်ယာစောင်းမှာထားလိုက်တာကြောင့် တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ဒူးနှစ်ချောင်း ထောင်လို့နေတယ်။ မျိုးကျော်ကပေါင်းကြားထဲ ခေါင်းဝင်လျှိုလိုက်ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ပုခုံးနှစ်ဖက်ပေါ်တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ခြေထောက်တွေကိုတင်လိုက်တာကြောင့် ရွှေခရုလေးကမျက်နှာတည့်တည့်ကို ရောက်လာတယ်။ တင်မိုးနိုင်ဆီက ...
“ အိုး ...ကိုရယ် ... မိုးငရဲတွေကြီးနေပါ့မယ် ”
“ ကိုယ့်ခွင့်လွှတ်တယ် ... ငရဲမကြီးပါဘူး မိုးရယ် ... ဟီးးး ”
ဘယ်ဖက်ပေါင်လယ်ကနေ လျှာအပြားလိုက်အောက်ဖက်ကို လျှက်ပြီး တချို့နေရာတွေကိုတော့ စုပ်နမ်းတာကြောင့် တင်မိုးနိုင်ခမျာ တွန့်ကနဲ တွန့်ကနဲ ခြေထောက်လေးတွေပါတုန်နေတာ တီကောင်ဆားထိသလိုပါဘဲ။ မျိုးကျော်ရဲ့ လက်ဦးဆရာ ဇင့်ရဲ့အသံက နားထဲမှာကြားယောင်နေတုန်း ....
“ နောက်တခါမှတ်ထား မြန်မာ့အသံတခါပဲ လွှင့်တယ် ... ဒါအရေးကြီးတဲ့ စည်းကမ်းပဲ သေချာနားထောင်ပါ.. နှုတ်ခမ်းတွေရယ် ပါးလေးတွေရယ် နားလေးတွေ လည်တိုင်လေးတွေကို ၅ မိနစ် နမ်းရမယ်..နောက်ပြီးတော့ နို့လေးတွေရယ် ဗိုက်သားလေးတွေကို သေချာ စုပ်နယ် နမ်းရမှာ ၁၀ မိနစ်... ခြေသလုံးလေးတွေရယ် ပေါင်လေးတွေရယ်နောက် ညီမလေးကိုကော စုပ်နမ်း ပေးရမှာက မိနစ် ၂၀ ...အဲလို အကြာကြီး အရင် နမ်းတာ ပိုကြိုက်တယ်..”
ထိုအချိန်က မျိုးကျော်က တက်ထွက် ကိုယ်လုပ်ရရင်ပြီးရော အတွေ့ကြုံမရှိသေးတဲ့ လူတယောက်ပေါ့လေ ... ခုကတော့ အတွေ့ကြုံရှိလာသလို ကိုယ့်ရဲ့သီအိုရီလေးတွေကိုပါပေါင်းစပ်ပြီး အသုံးချနည်းအသစ်တွေကြောင့် အခြေနေပေါ်မူတည်ပြီးဆောင်ရွက်တတ်နေပါပြီဇင်ရယ်။
မျိုးကျော်က ဘယ်ပေါင်ကနေညာဖက်ပေါင်ကိုဆက်ပြောင်းပြီး နမ်းစုပ်လိုက်တယ်။ ရွှေခရုလေးအ၀မှာ ချစ်ရည်ရွှန်းလဲ့လာတာကိုမြင်နေရပြီလေ။ ရွှေခရုရဲ့အပေါ်ပိုင်းကို ကျော်ပြီးအမွှေးရေးရေးလေးရဲ့ ဆီးခုံစပ်ကို လျှာလေးပြေးဆော့နေတယ်။ ရွှေခရုနဲ့ချက်ကြားထဲက ဗိုက်အောက်ပိုင်းသားကို စုပ်နမ်းတော့ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ဗိုက်သားတွေ ရေကန်ထဲ ခဲလေးပစ်ချလိုက်သလိုမျိုး ဗိုက်ပြင်မှာလှုပ်ခါလို့နေတယ်။ ချက်ဝကို လျှာလေးထည့်ကလိပြီး ချက်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ပွတ်သတ်ကစားရာကနေ ပုခုံးပေါ်တင်ထားတဲ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို အသာအယာချလိုက်တော့ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ လက်တွေက သူ့ခေါင်းကို ဆွဲတင်ပြီး သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို နမ်းဖို့ကြိုးစားလာတာကြောင့် အသာအယာတွန်းဖယ်လိုက်ပြီး ဘယ်ဖက်ရင်သားကိုညာဖက်လက်နဲ့ ညင်သာစွာအုပ်လိုက်တယ်။ လက်မနဲ့လက်ညှိုးကြားထဲကိုနို့သီးခေါင်းလေးတွေညှပ်ပြီးနောက် တင်းတင်းရင်းရင်းရှိလှတဲ့ နို့အုံလေးအားဖြေးညှင်းစွာဖိနယ်ပေးလိုက်ပြီး တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ညာဖက်နို့သီးခေါင်းလေးကို စုပ်ယူလိုက်တယ်။ မျိုးကျော် စတင်မနမ်းမှီမှာ နို့သီးလေးတွေချိုင့်ဝင်နေပေမယ့် အခုမှာတော့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကတောင်ထွက်လို့လာတော့ ဇီးစေ့ခန့်လေးလောက်ဖြစ်နေတယ်။ မျိုးကျော်ကအသာအယာစုပ်ယူပြီးတော့ နို့သီးထိပ်ဖျားကို သွားနဲ့ ညင်သာစွာမလွတ်အောင် ကိုက်ထားပြီးလျှာဖျားလေးက နို့သီးခေါင်းထိပ်လေးကိုထိုးဆွပေးလိုက်တော့ တင်မိုးနိုင်ခမျာ တိုးညှင်းစွာပေါက်ကွဲသံလေး ထွက်လာတော့တယ်။ မျိုးကျော်မှာ ညာလက်ကနေ တင်မိုးနိုင်ရဲ့နို့တွေကိုပွတ်သပ်နေရာမှ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ဘယ်လက်မောင်းလေးကို အသာအယာပြေးဆော့ပြီး တင်မိုးနိုင်၏ လည်တိုင်လေးရဲ့ ဘယ်ဖက်ခြမ်းကို လက်ချောင်းလေးတွေရဲ့ လက်သည်းအပေါ်ဖက်လက်ဆစ်လေးတွေနဲ့ မထိတထိပွတ်သပ်ပေးလိုက်တော့ တင်မိုးနိုင်ရဲ့မျက်နှာလေးဟာ ညာဖက်ကိုလှည့်သွားပြီး ... အင်းးး ..ဟင်းးး ..ဟင်းးး ဆိုတာလေးကြားလိုက်ရတာကြောင့် စုပ်နမ်းနေတဲ့ ညာဖက်နို့သီးကိုလွှတ်ပေးလိုက်ပြီး လှည့်လာတဲ့ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းအစုံကိုကြိုဆိုပေးလိုက်တော့တယ်။ ပက်လက်လှန်အိပ်နေတဲ့ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ချိုင်းအောက်ကို မျိုးကျော်ရဲ့လက်တွေလျှိုထားပြီး မျိုးကျော်ရဲ့ လည်ပင်းကို တင်မိုးနိုင်က သိုင်းဖက်လိုက်ကာ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ခြေထောက်နှစ်ဖက်မှ မျိုးကျော်ရဲ့ခါးကို ခွလိုက်ကာ ခြေချင်းချိတ်ထားခြင်းခံ လိုက်ရတာကြောင့် မျိုးကျော်မလှုပ်သာ မလှည့်သာတချက်ဖြစ်ကာ တင်မိုးနိုင်ရဲ့နှုတ်ခမ်းနဲ့ မျိုးကျော်တို့ရဲ့ နှုတ်ခမ်းကြား အနမ်းစစ်ပွဲ စတင်ဆင်နွဲလိုက်လိုက်ကြတယ်။ မျိုးကျော်ရဲ့ညီလေးကလည်း တင်မိုးနိုင်ရဲ့ဗိုက်ကို အစွမ်းကုန်ထောက်လို့နေတာကြောင့် အနမ်းကိုရပ်လိုက်ပြီး တင်းကြပ်စွာဖက်ထားတဲ့ လက်တွေဖြေလျော့ကာ မုဆိုးထိုင် နေရာယူလိုက်တော့တယ်။ ပြီးနောက် .. တင်းမာနေတဲ့ ဒုတ်ကို အချစ်ရည်ရွှမ်းနေတဲ့ ရွှေခရုအ၀ကိုတေ့ပြီး ... “ ဒီတခါ မနာတော့ဘူး မိုးရယ် ... မကြောက်နဲ့နော် ” ပြောကာကိုယ်ခန္ဓာအပေါ်ပိုင်းကိုရှေ့သို့ကိုင်းပြီး ထောင်မတ်နေတဲ့ဒုတ်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ရွှေခရုထဲ စိုက်ချလိုက်ပါတော့တယ်။
ရွှေခရုထဲကို စိုက်ချလိုက်တယ်ဆိုတာ တကယ့်ကိုဖြည်းဖြည်းလေး ညင်သာစွာစိုက်ချလိုက်တာပါ။ အချစ်ရည်ရွှမ်းနေတဲ့ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ရွှေခရုလေးက မျိုးကျော်ရဲ့ ညီတော်မောင်ကို ကြိုဆိုလိုက်တာတကယ့်ကိုနွေးထွေးပါတယ်။ တဆစ်ခြင်းထိုးသွားလိုက်တာ ဆီးခုံခြင်းအပ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ ခေတ္တရပ်ပြီး မျိုးကျော်တင်မိုးနိုင်ရဲ့ မျက်နှာလေးကို ကြည့်လိုက်တော့ နာကျင်နေပုံမရ ခံစားမှုတခုခုကိုရရှိသွားပုံဖြစ်နေတာကြောင့် ရင်ထဲအေးသွားတယ်။ မျိုးကျော်က ...
“ မနာတော့ဘူး ဟုတ်လား မိုး ”
တင်မိုးနိုင်က မျက်လုံးချင်းမဆိုင်ပဲ ညာလက်လေးကိုနှဖူးပေါ်တင်ကာ ခေါင်းလေးကို မသိမသာလေး ငြိမ့်ပြတယ်ဆိုယုံလောက်နဲ့
“ အင်းးးး ”
မျိုးကျော်က တင်မိုးနိုင်ဆီက မီးစိမ်းပြမှုရသွားတာနဲ့ ခါးလေးကို ဖြည့်ညှင်းစွာ စတင်လှုပ်ရှားလိုက်တော့တယ်။ တကြိမ်တည်းသာ ဧည့်သည်ကို လက်ခံဖူးသေးတဲ့ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ရွှေခရုလေးက တကယ့်ကို စီးစီးပိုင်ပိုင်နဲ့ ချစ်ရည်ရွှမ်းနေတာကြောင့် အခက်ခဲမရှိဝင်ရောက်လို့ရနေနိုင်တာပါ။ သုံးလေးချက်လောက် လှုပ်ရှားမိချိန်မှာတော့
“ အင်းး ... ဟင်းးး ဟင်းးး ...”
တိုးညင်းစွာထွက်ပေါ်လာတဲ့ ညီးညူသံနဲ့အတူ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ သေးသွယ်တဲ့ခါးလေးက ဘေးဖက်ကို တွန်းရမ်းလို့နေပြီး မျက်နှာကို ညာဖက်တစောင်းသို့ အနည်းငယ်စောင်းကာ ဘယ်လက်မှ အိပ်ယာခင်းကိုစတင်ဆုပ်ဆွဲလာတယ်။ သူ့ရဲ့ ခံစားမှုတွေ ရာနှုံးပြည့်တော့မယ်ဆိုတာ မျိုးကျော်သိလိုက်တာကြောင့် ....
“ မိုး ... ကိုယ့်ကျောလယ်ကို အသာလေးသိုင်းဖက်လိုက် ”
တင်မိုးနိုင်က ကျောလယ်ကိုသိုင်းဖက်လိုက်ကာ ဒူးကွေးပြီး ဖါးထိုင်ထိုင်သလို ခြေထောက်အနေထားရှိနေတဲ့ မျိုးကျော်ရဲ့ ခါးလယ်ဘေးဘီဝဲယာမှ သူမရဲ့ခြေထောက်တွေအသာအသာတင်လိုက်တော့ ... မျိုးကျော်ရဲ့ ခါးအားအသုံးပြုမှု အနည်းငယ်အရှိန်မြင့်လိုက်တော့တယ်။ တပြိုင်တည်းမှာပင် တင်မိုးနိုင်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းအစုံကို နမ်းစုပ်လိုက်တော့ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ အသက်ရှုသံ တော်တော်မြန်လာနေပြီဆိုတာ သတိထားမိလိုက်တယ်။ မွေ့ယာကြီး၏ တန်ပြန်တွန်းကန်မှုလား .... တင်မိုးနိုင်ရဲ့ အောက်ကနေ ပြန်လည်ပင့်ပေးတာလား သေချာစွာမသိ .. စည်းချက်ဝါးချက်ညီညာလာသလိုဖြစ်လာတာကြောင့် မျိုးကျော် ပြီးချင်လာသလိုလိုဖြစ်လာပြီး ....
“ ကိုယ်ပြီးချင်နေပြီ ...မိုး ”
“ အင်း .... အီးး .... ”
တင်မိုးနိုင်ထံမှ စကားပြန်မလာတော့ပဲ မျက်မှောင်ကြုံ့တက်လာကာ နှုတ်ခမ်းတွေကို တအားစုပ်လာပြီး အသက်ရှုသံက ဆောင့်ဆောင့်ပြီးကြားနေရသလိုဖြစ်လာကာသိုင်းဖက်ထားတဲ့ လက်တွေက မျိုးကျော်ရဲ့ ခါးဝန်းကျင်ကိုဆွဲဆောင့်သလိုလုပ်လာတယ်။ ဖက်ရာကနေ ခါးကိုကော့တက်ခါ အရှိန်တန့်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲ မျိုးကျော်လည်း မထိန်းနိုင်တော့ ရွှေခရုထဲ လွှတ်ပေးလိုက်တော့တယ်။ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ဗိုက်သားနဲ့ မျိုးကျော်ရဲ့ ဗိုက်သားပြင်တို့ ထိမိနေတာကြောင့် ညီလေးက တချက်ညှစ်ထုတ်လိုက်တာနဲ့ တင်မိုးနိုင်ဗိုက်ပြင်က တချက်တွန့်သလိုလိုဖြစ်တာ သိလိုက်တယ်။ သူဖက်တာတဲ့လက်တွေလည်း တင်းကြပ်မြဲဖြစ်နေတာကြောင့် မျိုးကျော်လည်း တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ခေါင်းအုံး ဘယ်ဖက်မှာ နဖူးလေးထိုးပြီးမျက်နှာအပ်လိုက်တော့ တင်မိုးနိုင်ရဲ့ ဘယ်ဖက်ပါးနဲ့ မျိုးကျော်ရဲ့ ဘယ်ဖက်ပါး အပ်လို့နေရင်း ...
“ ကို ... တော်တော်အရှိန်ပြင်းတယ် ... ပန်းလိုက်တာ သားအိမ်အထိပဲလားမသိဘူး ”
“ အင်း ... တူတူပြီးသွားတာနဲ့တူတယ် အထဲကိုထည့်လိုက်တော့ ဘယ်လိုလဲဟင် ”
“ ဘယ်လိုလဲဆိုတာ မပြောပြတတ်ဘူး ... တချက်ဝင်သွားတိုင်း ခါးဘယ်ညာက ကြွက်သားတွေ အေးကနဲ့ဖြစ်သွားတာ သိတယ် ”
တင်မိုးနိုင်ပြောတာ မျိုးကျော်နားမလည်ပါ။ ဒါပေမယ့် ... အင်း လို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ နှစ်ယောက်သားထပ်ပြီးမခွာဘူးဆိုပေမယ့် မျိုးကျော်က ဒူးနဲ့တံတောင်မှာအားပြုပြီးအသာလေးထပ်ထားတာကြောင့် တင်မိုးနိုင်မလေးတာကြောင့် ဖက်လျက်သားနေတယ်။ ညီတော်မောင်လည်း ရွှေခရုထဲ အနားယူလျက်ပဲ ... တင်မိုးနိုင်က ...
“ ကိုယ်ဝန်ရှိသွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ကို ... ဘာလေးလိုချင်လဲဟင် ”
“ အမွှာပူးလေး ... မိန်းကလေးတယောက် ယောက်ကျားလေးတယောက် ..ဟီးးးး ”
“ အင်း ... မိုးတို့အသက်က မငယ်တော့ မြန်မြန်ရသွားလည်း ကောင်းတာပေါ့နော် ”
“ ကိုယ်က မိန်းမ မရသေးခင်ကတည်းက ကလေးလိုချင်နေတာ ...ဟိဟိဟိ ”
“ ဟုတ်လား ... ကလေးချစ်လို့လား ကို ”
“ အင်း .. မေမေ့ကို မြေးပေးချီချင်တာလေ ... ကိုယ်ကတော့ ကလေး သုံးယောက်လောက် အနည်းဆုံးလိုချင်တယ်ကွာ တယောက်ထဲမကောင်းဘူး ”
“ ဟုတ်ကဲ့ ... ကို လိုချင်ရင် မိုး ကြိုးစားမွေးပေးပါ့မယ်ရှင် ”
မတိုင်ပင်ပဲပြုံးမိသွားတော့တယ်။ ညီလေးလည်း မာန်ကျပြီး ရွှေခရုထဲကတွန်းကန်အားကြောင့် ထွက်ကျလာတယ်။ ခဏက ရွှေခရုထဲကိုအလည်ရောက်သွားတဲ့ မျိုးကျော်ညီလေးထံက လက်ဆောင်တွေ အနည်းငယ်ပြန်စီးကျလာတာကြောင့် ကုတင်ဘေးစားပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့ တစ်ရှုးဘူးထဲကနေ သုံးလေးရွက်ဆွဲထုတ်ကာရွှေခရုလေးကိုအုပ်ပေးလိုက်တော့တယ်။
တင်မိုးနိုင်ရဲ့အမေ ဆေးရုံတွင် တစ်ညတာနေပြီးနောက်နေ့တွင် ဆေးရုံဆင်းသည်။ မျိုးကျော်အဖေနှင့်အမေတို့လူကြီးမိဘစုံရာဖြင့်တောင်းရမ်းပြီး မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲအား ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မကျင်းပတော့ပဲ တင်မိုးနိုင်၏ ဆန္ဒအရ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် မင်္ဂလာဆွမ်းကျွေးလိုက်ပြီးနောက် မျိုးကျော် အိမ်တွင်ပင်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ မျိုးကျော်၏ မိခင်မှာလည်း သားဖြစ်သူ၏ ဇနီးအား မိမိ၏သမီးတယောက်ကဲ့သို့ချစ်မြတ်နိုးပြီး တင်မိုးနိုင်က သမီး မျိုးကျော်မှာ သမက်အသွင်ဖြစ်နေသည်။ အဖေ၏တိုက်တွန်းမှုကြောင့် မျိုးကျော်တို့လင်မယား အလုပ်ထွက်ပြီး ကုမ္ပဏီတခုတည်ထောင်ကာ မိမိတို့လုပ်ခဲ့သည့်လုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံများကြောင့် စီးပွားရေးဖြစ်ထွန်းခဲ့သည်။ စီးပွားရေးကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့် မျိုးကျော်တို့အိမ်ထောင်ရေးလွန်စွာ သာယာလှသည်။ အိမ်ထောင်သက် ၂နှစ်မြောက်တွင် သားဦးရတနာတယောက်၊ နောက် ၃နှစ်တွင် သမီးတယောက် ထွန်းကားခဲ့ပြီး မိဘများ၏ မြေးချီချင်သော ဆန္ဒအားဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့သည်။
မျိုးကျော်တို့ အိမ်ထောင်သက် ကိုးနှစ်ပြည့်သော ဇန်န၀ါရီ - ၁၇ ၊ ၂၀၁၀ (တနင်္ဂနွေနေ့) တွင် ချစ်ဇနီးတင်မိုးနိုင်၏ ဆန္ဒအရ ရန်ကုန်မြို့၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် မျက်မမြင်ကျောင်းတွင် ပညာရေးဒါန၊ အလှူပြုလုပ်ချင်သည်ဟု ဆိုလာသဖြင့် မျိုးကျော်နှင့်တင်မိုးနိုင် တူတူသွားရောက်ခဲ့ရာ မြန်မာဆိုက်ဘာ မီဒီယာဖိုရမ်ချာရတီမိသားစုမှ အလှူပြုလုပ်နေသော ရက်ဖြင့်တိုင်ဆိုင်နေသောကြောင့် မျိုးကျော်နှင့် တင်မိုးနိုင်တို့ မျက်မမြင်ကျောင်း၏ ရုံးခန်းရှေ့တွင်ထိုင်ပြီး အ၀တ်စ အမဲရောင်များဖြင့် မျက်စိကိုပိတ်စီးကာ မျက်မမြင်များ၏ဒုက္ခကို စာနာမှု၊ နားလည်ပေးနိုင်သည့် ခံစားမှုများအား ကိုယ်ချင်းစာတရားဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသော မြန်မာဆိုက်ဘာမှ လူငယ်များ၊ မန်ဘာများအား မျိုးကျော်မှာ စိတ်ထဲမှ ချီးကျူးထောပနာ ပြုနေမိသည်။
MRTV -4ကင်မရာရှေ့တွင် အင်တာဗျူးအား အင်မတန်ရည်မွန်သော လူငယ်လေးတဦးမှဖြေကြားနေသဖြင့် အခန်းပြင်တွင်ခေတ္တစောင့်ဆိုင်းပြီးနောက် အင်တာဗျူးအပြီးတွင် ချွေးသုတ်ပြီးထွက်လာသော ထိုလူငယ်လေးအနားသို့ ကပ်ခါ မေးမြန်းလိုက်သည်။
“ ညီလေး ... မြန်မာဆိုက်ဘာဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်ကလဲဗျ ”
“ သြော် .. ဟုတ်အစ်ကို .. ကျွန်တော်တို့ အွန်လိုင်းသူငယ်ချင်းများက စုပေါင်းပြီးအလှူပြုလုပ်ကြတာပါ။ မြန်မာဆိုက်ဘာမီဒီယာဖိုရမ် ဆိုပြီး အင်တာနက်မှာ ခေါက်ကြည့်လိုက်လေ .. အစ်ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ မန်ဘာဝင်လုပ်လိုက်ပေါ့ ... ပျော်စရာကောင်းပါတယ်ဗျာ ”
“ ကျေးဇူးပါဗျာ ... အစ်ကိုနာမည် မျိုးကျော် လို့ခေါ်ပါတယ် .. တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်နော် .. ဒါထက် ညီလေးနာမည်က ... ”
“ ဟုတ်ကဲ့ ... ကျွန်တော့က indy.remy လို့ခေါ်ပါတယ်။ အတိုခေါက် အင်ဒီလို့ပဲ မှတ်ထားပါ ”
မြန်မာဆိုက်ဘာမီဒီယာဖိုရမ်မှ မန်ဘာများ ကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့် ဓါတ်ပုံတွဲရိုက်ပြီးနောက် နေ့လည် ၁၂ ကျော်ကျော်တွင် ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြသည်။ မျိုးကျော်နှင့် တင်မိုးနိုင်လည်း ကျောင်းအုပ်ကြီးထံသို့ ကျောင်း၏လိုအပ်သည်များအားမေးမြန်းပြီး အလှူငွေထည့်ပြီးနောက် အိမ်ပြန်ခဲ့သည်။ တင်မိုးနိုင်မှ ဒဂုံစင်တာတွင် ဈေးဝယ်ချင်သည်ဟု ပြောသဖြင့် ဒဂုံစင်တာကိုလိုက်ပို့ပေးပြီး မခင်အေးဆိုင်ရှေ့တွင် ကားပါကင်ထိုးမည်အလုပ် နောက်ကြည့်မှန်တွင် လှစ်ကနဲ လူရိပ်မြင်လိုက်တာကြောင့် ဘရိတ်ကို ဆောင့်နင်းလိုက်ပြီး ကားတံခါးဖွင့်ဆင်းလိုက်ရာ မိန်းကလေးတဦး တစောင်းအနေအထားဖြင့် ထိုင်လျက်ဘယ်ခြေထောက်လေးကို ကိုင်ကြည့်နေတာတွေ့တယ်။
“ ဘာဖြစ်သွားသေးလဲ ... ညီမ ”
“ ................... ”
သူမ၏ ရှေ့ဖက်မှ ပတ်ခါ မေးမည်အလုပ် ဇင် ... ဇင်မှဇင် ... ရယ်ပါ။ အလန့်တကြားဖြစ်သွားသော မျိုးကျော်၏ မျက်နှာအား ကောင်မလေးက စိုက်ကြည့်ခါ အံ့သြစွာဖြင့် ...
“ ဟင် .. ဦးလေးပါလား ... အားးး နာလိုက်တာ ”
“ တော်တော်နာနေလား ..ဆေးရုံသွားလိုက်ရအောင်လေ ”
“ ရပါတယ် ... သမီးနက်ဖြန် အလုပ်အင်တာဗျူးရှိလို့ CV လာဝယ်တာ လောလောနဲ့ ဦးကားနောက် ဖြတ်ပြေးလိုက်တာလေ .. သမီးအပြစ်ပါ ”
“ ဟာ ... မဟုတ်တာ ... ထနိုင်လား သမီး လာ .. ဦးကိုတွဲ ”
ဘေးက အအေးဆိုင်ထိုင်ခုံမှာ ခဏထိုင်ခိုင်းလိုက်ပြီး ကားပါကင်ထိုးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကားထဲက ဟန်းဖုန်းယူပြီး တင်မိုးနိုင်အားလှမ်းခေါ်လိုက်တော့ တင်မိုးနိုင် အလောတကြီးရောက်လာတယ်။ အအေးဆိုင်မှာ တူတူထိုင်ကာ ကားနဲ့ခိုက်မိသွားတဲ့ ကောင်မလေး မျက်နှာကိုကြည့်ပြီး ...
“ သမီး ... စိတ်မပူနဲ့နော် အန်တီတို့ အားလုံးတာဝန်ယူပေးမယ် .. အအေးသောက်ပြီးရင် ခဏကခိုက်မိသွားတဲ့နေရာကို ဆေးရုံသွားပြလိုက်ရအောင်နော် ”
“ ဟုတ်ကဲ့ အန်တီ ... ကျေးဇူးပါပဲရှင့် ”
“ ဘယ်ဆေးရုံသွားမလဲ မိုး ... ”
“ SSC ပဲနီးတယ်လေ ကိုရယ် ... သူနာနေရှာမှာပဲ သနားပါတယ်ကွယ် ”
SSC ဆေးရုံရောက်တော့ တင်မိုးနိုင်ကပဲ အားလုံးဦးဆောင်လုပ်ပေးသွားတယ်။ ဓါတ်မှန်ရိုက်ပြီး ဆရာဝန်က ညာခြေသန်း အရိုးနည်းနည်းအက်သွားတာကြောင့် ကျောက်ပတ်တီးကိုင်ရမယ်။ ဆရာဝန်က ညနေမှ လာမယ်ဆိုတော့ ဆေးရုံမှာ ခဏစောင့်ဖို့ ပြောတာနဲ့ တင်မိုးနိုင်က ဆေးရုံခဏတက်ပြီးသေချာကုသဖို့ထားတိုက်တွန်းမှုကြောင့် SSC အထူးကုဆေးရုံအပေါ်ထပ်တွင် ဆေးရုံခဏတက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်။ အပေါ်ထပ်ရောက်တော့ နပ်စ်မလေးဦးဆောင်ရာနောက် လိုက်သွားတဲ့အခါ မျိုးကျော်လွန်စွာအံသြမိတယ် ... ကုတင်နံပါတ် - ၃၁…။ တိုက်ဆိုင်တာလား .. ကံကြမ္မာအလှည့်အပြောင်းလား မသိတော့ပေ။ တင်မိုးနိုင်က ဆေးရုံမှာတူမဆိုပြီး ရေးသားထားတယ်။ တင်မိုးနိုင် မျိုးကျော်အား လက်ကုပ်ပြီး အပြင်ခေါ်ထုတ်တာကြောင့် မျိုးကျော်မှာ တင်မိုးနိုင်နောက် လိုက်ပါခဲ့တယ်။
“ ကို .. ကောင်မလေးနာမည် ဇင်မေသူ ... တဲ့ ... နက်ဖြန်အလုပ်အင်တာဗျူး သွားမလို့ ခုလိုဖြစ်သွားတော့ သနားပါတယ် ... အမေတခု သမီးတခုနေတာ ဆိုပဲ ... မိုးတို့ရုံးမှာခန့်လိုက်မလား ... LCCI ပြီးထားတော့ အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ် ”
“ ......... ........... ”
“ ကိုရယ် ... ခန့်ပေးလိုက်နော် ”
“ မိုး က ခန့်စေချင်တယ်ဆိုလည်း ခန့်ပေးလိုက်မယ်လေ ... ဟင်းးး ”
“ ဘာလို့ သက်ပြင်းချတာလဲ ဟင် ”
မျိုးကျော် တချက်ပြုံးလိုက်ပြီးနောက် ... “ မိုး ... ကုတင်နံပါတ် သတိထားမိလား ”
“ အင်း ... ကုတင်နံပါတ်-၃၁ လေ .. ဘာဖြစ်လို့လဲ ”
“ မိုးရဲ့ ညီမလေးကို ကိုယ်စတွေ့ခဲ့တုန်းက မိုးတက်ခဲ့တာလည်း ကုတင်နံပါတ်-၃၁ ပဲလေ ဟိဟိ ”
“ သွား ... ဘာတွေလာပြောနေတာလဲ ကိုရယ် ... ဒါမျိုးဆိုရင် သူတော်တော်မှတ်မိတယ် ”
ဒေါ်တင်မိုးနိုင် မျက်နှာလေး တချက်နီမြန်းသွားကာပြောလိုက်ပြီး ဦးမျိုးကျော်မှာလည်း သူ့အတွေးနဲ့သူ တဟားဟားရယ်မောလိုက်လေတော့သည်။